မမသင်း – Hlataw.com
” ဟေ့ကောင်..မင်းဒီတစ်ပါတ်လုံးလုံး အပြင်လုံးဝမထွက်ရဘူး..ကြားလား.မင်း အပြစ်မင်းသိ.မမြထွေး ကြည့်ထိန်းထား. မော်မော်တို့ကလည်း .နင်တို့တူ..နင်တို့ မောင်ကိုကြည့်ထိန်းထား..အပြင်မှာငါနဲ့ တွေ့ရင် သေပြီသာမှတ်တော့ ” အဆူခံရတာ နည်းတောင်မှနည်းနေ မလားမသိဘူး..မနေ့ မနက်ကတည်းက ကျောင်းကိုထွက်သွားလိုက်တာ.ဒီနေ့ည နေမှပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ ဒေါမပွတဲ့ မိဘရယ်လို့ ဘယ်ရှိနိုင်ပါ့မလဲ။မင်းမင်းရဲ့ အဖေကဒေါသကြီးတယ်။ကျောင်းမှာစာ အသင်အပြ သိမ်မွေ့လိမ်မာကျွမ်းကျင်သ လောက် အိမ်မှာတော့ပောက်ကွဲလွယ်ပြီး တော်တော်လေးတင်းကျပ်တယ်။အရက် လည်းသောက်တယ်..ဘဝမှာမကျေနပ်ခဲ့ အားမရခဲ့သမျှလူမှုရေးပိုင်း လုပ်ငန်းပိုင်း တွေအားလုံး အိမ်ရောက်တော့ အရက်နဲ့ အတိုးချပြီးဖွင့်ထုတ်တဲ့သဘောပါ။အဖေ ဆိုပေမယ့်..ပထွေးပါ။မင်းမင်းအခါလည် သားလောက်မှာအဖေအရင်းကစက်လှေ မှောက်ပြီးဆုံးသွားတော့ အားကိုးရာမဲ့တဲ့ အမေက ကျောင်းဆရာမုဆိုးဖိုကြီးနဲ့ညား ခဲ့ကြတာလို့ပဲလွယ်လွယ်မှတ်သားခဲ့ဖူးပါ တယ်။အမေပြောပြခဲ့တဲ့ဘဝဇာတ်လမ်းကအများကြီးဆိုတော့.ညားခဲ့ကြတုန်းကအမေကအသက်နှစ်ဆယ့်နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ မုဆိုးမ နုနုစိုစို ပျိုပျိုလွင်လွင်လေး.အဖေ ကအသက်လေးဆယ်ပိုပိုစွန်းနေပြီဖြစ်တဲ့မုဆိုးဖို ဆိုတာလောက်တော့ခပ်ရေးရေး မှတ်မိပါတယ်။မမသင်းကပိုမှတ်မိမလား တော့မသိဘူး..အသက်က မကွာပေမယ့်သူကမှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းလို့ပါ။သူ့ထက် ပိုမှတ်မိနိုင်တဲ့သူကဒေါ်လေးမော်မော်ပါ ပဲ.အမေ့ထက်ငါးနှစ်လောက်ငယ်တဲ့ညီမ ပေါ့။အခုမှ အသက်သုံးဆယ့်သုံးနှစ်ပဲရှိ သေးတဲ့မုဆိုးမ ပူပူနွေးနွေး။ရေဆေးငါးလိုဘော်ဒီကြီးနဲ့ဖြူဖြူဝင်းဝင်း.မထိရက်မ ကိုင်ရက်စရာ.နို့ကြီးတွေကအိနေတာပဲ။ အေးအေးဆေးဆေးကျောင်းဆရာမလုပ် နေတာအကောင်းသား..ရွထ,ပြီးဗိုလ်မှူး ဆိုလို့ယူလိုက်မိတာပာ။ညားပြီးလို့သုံးနှစ် တောင်မပြည့်သေးဘူး..တိုက်ပွဲမှာကျပြီးမုဆိုးမဘဝနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာတာ သုံး လေးလ လောက်ပဲရှိသေးတယ်။
တပ်ထဲ မှာနေတုန်းကလည်း စစ်သားပီပီရေကုန် ရေခမ်းနေ့မအိပ်ညမနားပါပဲ.ဗိုက်ပေါ်မှာ အိပ်ပျော်သွားရတဲ့ထိ ဆယ့်လေးငါးရက် လောက်ကောင်းကောင်းကြီးတော့အလိုးခံလိုက်ရဖူးပါရဲ့။နောက်ပိုင်းမှာသင်တန်းတက်နေရတာနဲ့..ရှေ့တန်းထွက်နေရတာနဲ့ ခွဲနေရတဲ့အချိန်တွေကချည့်ပဲရက်ရှည် လများမို့သူမျှော်လင့်ခဲ့ဖူးသလို အားရပါး ရ အလိုးခံရဖို့နေနေသာသာ ငတ်နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေချည့်သာကြုံခဲ့ရတဲ့သူပေါ့။ အားရအောင်ဆူပြီးထမင်းဝိုင်းလေးကထ,သွားတော့မှ ဒေါ်လေးမော်မော်က သူ့နံဘေးမှာ ဖင်ထိုင်ခုံလေးတစ်ခုံဆွဲပြီးလာကပ်ထိုင်တယ်။အိမ်မှာက စားပွဲဝိုင်း ပုလေးမှာသစ်သားဖင်ထိုင်ခုံပုလေးတွေ နဲ့ပဲထိုင်ပြီးထမင်းစားကြတာပါ။မျက်နှာ ညှိုးပြီး ထမင်းမစားပဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့မင်းမင်းကိုမြင်တော့ ဒေါ်လေးကစိတ် မကောင်းနိုင်ဘူး။ငယ်ကတည်းကသူ့အ မေထိန်းရတာကနည်းနည်း.သူထိန်းလာ ခဲ့ရတာကများများ။ထမင်းခွံ့ ရေချိုး အ ဝတ်လဲ သေးပေါက်ချေးပါ ကအစ,ပြစုခဲ့ ရတဲ့ကလေးဆိုတော့ သူ့သားဆိုလည်းမ မှားဘူးပေါ့။ခုလိုမှိုင်ပြီးထမင်းမစားပဲထိုင် နေတော့ ရင်ထဲမှာသိပ်မချိလှဘူး။မင်းမင်းနံဘေးမှာဖင် ထိုင်ခုံလေးချ..ပေါင်လုံးအိအိကြီးတွေနဲ့ဖိ ကပ်ထိုင်.မင်းမင်းလက်မောင်းတွေသူ့ရင် ခွင်ထဲဆွဲထည့်ပြီးလက်တစ်ဖက်ကပုခုံးကိုလှမ်းဖက်ထားပစ်တယ်။အဆူခံရတာ ကိုအားပေးနှစ်သိမ့်ချင်လို့ရင်ခွင်ထဲထိဆွဲ သွင်းဖက်ထားတဲ့သဘောပေါ့။ ဒါပေမယ့်.သူကပယ်ပယ်နယ်နယ်အ လိုးခံထားခဲ့ရပြီး နို့ကြီးတွေစုပ်ပြတ်သပ် သွားအောင်အစို့ခံ အကိုင်အနယ်ခံထား ရဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံကပူပူနွေးနွေးရှိနေ တာ။ ပောင်လုံးတွေချင်းပူးဖိကပ်မိလိုက် တဲ့အချိန် လက်မောင်းကိုနို့ လုံးကြီးတွေနဲ့အိကနဲဖိကပ်မိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒိတ် ကနဲ နှလုံးခုန်တာရပ်သွားပြီး ကြက်သီး တွေ ဖျန်းဖျန်းထ,လို့ စောက်ဖုတ်အုံကြီး ရိုးတိုးရွတ ဖြစ်သွားမိတာတော့သတိပြု မိလိုက်သေးတယ်။ဒါလည်း ဒီအရသာ ကိုပေါ့ပေါ့လေးတွေးလိုက်ပြီးတူဝရီးပဲလို့ ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ညာရင်းဆက်ဖက်ထား လိုက်တော့ ဖီလင်ကသိသိသာသာ တိုး နေတော့တာပေါ့။
သူ့လင်ကပဲ သူ့နို့ကြီး တွေဖိနယ်ပေးနေသလိုလို..ပေါင်လုံးကြီး ချင်းဖိပြီးလီးကြီးကိုပဲ သူ့စောက်ခေါင်းထဲထိုးသွင်းလာတော့မှာလိုလိုထင်မိယောင် မှားဖြစ်လာတော့ လူမသိ သူမသိနဲ့တိတ် တိတ်ကျိတ်ပြီးဖီလင်ယူရတဲ့ဒီအရသာမျိုး ကိုတအားကြီးကြိုက်မိသွားတယ်။ ” ထမင်းစားလိုက်ပါဦး ကိုမင်းရာ..ဆ ရာကြီးကကောင်းစေချင်လို့ဆူပြီးထိန်းတဲ့ သဘောပါ..စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ကွာ..နဲနဲလောက်တေ့ စားလိုက်နော် ” ပုခုံးကိုလှမ်းဖက်ထားတဲ့လက်က သုံး လေးချက်ဆွဲဆွဲလှုပ်ခါပြီးပြောနေတာဆို တော့ သူ့ဖက်ကပ်နေတဲ့ပုခုံးကနို့ အုံလုံး ကြီးကိုဖိပြီးအိဝင်နေတယ်။အင်္ကျီတွေနဲ့ ဘော်လီတွေကြားကခံနေလို့အားသိပ်မရလေတော့စိတ်ရှိလက်ရှိဆွဲဖက်ပစ်တာ နို့ လုံးကြီးတောင်မှ အိအိပြားပြီးပြန့်ကားထွက်သွားလေမလားလို့ထင်နေမိတယ်။ ပုခုံးတစ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ဆွဲဖက်ခံနေရလေ တော့မင်းမင်းရဲ့စိတ်တွေထမင်းဂိုင်းဆီပန်ရောက်လာရ တယ်။သူသတိရတော့ သူ့ကျောပြင်တစ် ခုလုံးကမော်မော့်ရင်ခွင်ထဲရောက်နေပြီး နို့ လုံးထွားထွားကြီးတွေနဲ့ပိကပ်လို့အိ အိစက်စက်ကြီးပူနွေးနေပြီ။ ” အင်းပါ..လိုးမှာပါ ဒေါ်လေးရယ်.. လိုး..အဲ.အဲ.ဟို.ဟိုလေ လိုး ” ဒေါ်မြမြထွေးနဲ့သင်းသင်းတို့ပါးစပ်ကြီး တွေဟောင်းလေားဟ,ပြီး လက်ထဲမှာကထမင်းလုပ်ကိုယ်စီတန်းလန်းတွေနဲ့ တစ် ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြောင်ပြီး ကြည့်နေမိကြတယ်။ပြီးတော့မှပါးစပ်ကြီး တွေလက်ဖဝားနဲ့ကိုယ်စီပိတ်ပြီး တစ်ခွီးခွီးရယ်ရင်းထမင်းဝိုင်းက ထ,ပြေးကြတယ်။ မော်မော်ကရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့မင်းမင်းရဲ့ ကျောပြင်ကိုတစ်ဘုံးဘုံးထုပြီး ပေါင်တွင်း ကြောဆွဲလိမ်တော့ မာမာတောင့်တောင့် အကြောပြိုင်းပြိုင်း လက်နဲ့အပြည့်ဖြစ်နေ တဲ့လီးကြီးကိုဆုပ်ဆွဲလိမ်နေမိရော။ရုတ် တရက်မို့လက်ဆုပ်ထဲမှာတင်းတင်းကြီး ပြည့်နေတာကိုသတိမထားမိသေးတော့ ရောင်ရမ်းပြီးဆွဲလိမ်လိုက်.ဆွဲဆိတ်လိုက် လုပ်နေပေမယ့် ထုတ်ကနဲ ထုတ်ကနဲ ဆွဲ လို့မရတော့မှပဲလီးကြီးပါလား လို့သတိပြုမိသွားရတော့တာပေါ့။ဟိုကြည့်.ဒီကြည့်နဲ့လုပ်နေပြီး ဘယ်သူမှမမြင်မှန်းသိတော့မှ ဖွဖွလေးပွတ်ရင်း …. နောက်တစ်ရက်မှာတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ် သွားပါပြီ။မော်မော့်အတွက်ကတော့မင်း မင်းဆိုတာက သူ့သားလေးပဲလေ..စိတ် လှုပ်ရှားတော့လည်းခဏပာပဲ။ထမင်းစား ပြီးအပမ်းဖြေရင်းတီဗီကြည့်တော့ သူတို့ မောင်နှစ်မကစာကျက်ပေါ့။ဘာမှမဆန်း လှတဲ့မိသားစုသာမန်နေ့ရက်တစ်ခုပါပဲ။
ညအိပ်ယာဝင်လို့အတွေးတွေ ကစဉ့်ကလျားပြေးသွားကြတော့မှ ပူပူနွေးနွေးကြီး ဆုပ်ကိုင်ဆွဲဆိတ်ခဲ့မိတဲ့မင်းမင်းရဲ့လီးကြီး နဲ့သူ့လင်ရဲ့လီးကို အလိုလိုနှိုင်းယှဉ်တွေးမိလျက်သားဖြစ်သွားတာ။သိပ်တောင် မှမမှတ်မိချင်သလိုဖြစ်နေပေမယ့်သူ့လင်ရဲ့ လီးကအခုလောက်ကြီးမတုတ်လှသလိုဒီ လောက်ကြီးလည်းအကြောမမာတာတစ် ခုကိုတော့ မှတ်မိတယ်လေ။ဟိုလူ့လီးက ပျော့ ပျော့ပြီးငိုက်ကျနေတတ်လို့်လိုးခါနီး တိုင်းသူ့လက်နဲ့ကိုင်ကိုင်ဆွပေးခဲ့ရတာမ မှတ်မိပဲဘယ်နေပါ့မလဲ။မင်းမင်းလီးကြီး ကမတ်မတ်ကြီးတင်းနေတာများဆွဲဆိတ် လိုက်မိတော့ ကိုယ့်လက်ကြောတွေသာ တင်းတင်းကြီးထောင်တက်နေအောင်ဆွဲ ဆိတ်ပေမယ့်.သူ့လီးကြီးကမာတောင်နေ လို့လက်သည်းတောင်တိုးလို့မပေါက်တာ အံ့ဩမိခဲ့ရသေးတယ်လေ။ပြီးတော့..ဟို လူ့လီးကိုလက်နဲ့တစ်ဆုပ်ပြည့်ပြည့် ဆုပ် လို့ရပေမယ့် မင်းမင်းလီးကြီးကိုဘယ်လိုမှဆုပ်လို့မကာမိခဲ့တော့ အားရပါးရဆွဲပြီး ဆောင့်ပစ်မိတုန်းကစိတ်တိုင်းကျအောင် ဆောင့်ပစ်လို့တောင်မရခဲ့ဘူး။ဒါတွေကို အတွေးရောက်သွားတော့ ထမီရင်လျှား အောက်ကနို့လုံးပြူးပြူးကြီးတွေဆီကိုသူ့ လက်နှစ်ဖက်ကပွတ်မိဖွမိ နယ်မိချေမိ နဲ့ ရွစိရွစိဖြစ်လာတယ်။ထမီရင်လျှားလေး ဖြေလျှော့ပြီးနို့ အုံကြီးကိုဖျစ်ချေရင်းနို့သီး ခေါင်းညိုတိုတို မာမာတောက်တောက် တွေကိုလှိမ့်နေမိတော့ဒီနို့တွေကိုမင်းမင်းငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းက အားရပါးရစို့ခဲ့ဖူးတာပါလား လို့အတွေးတွေပျံ့လွင့်မိ ပြန်တယ်။ငယ်စဉ်က နို့ဆာလို့ သူငိုတိုင်း လူကွယ်ရာရှာပြီးအပျိုလေးတန်မဲ့နဲ့နို့ကြီး တွေလှန်လှန်တိုက်ပေးခဲ့ရတာနေ့တိုင်းပါ ပဲလား..လို့တွေးမိတော့ အခုတောင်ပြေး တိုက်လိုက်ချင်စိတ်ဖြစ်မိတယ်လေ။ဒီလို နဲ့ပဲစောက်ရည်တွေစိမ့်လာတော့စောက် စေ့ကိုဖိဖိပြီးကျိတ်ချေပစ်လိုက်..စောက် ခေါင်းထဲလက်ချောင်းလေးတွေမျဉ်းမျှဉ်းထိုးသွင်းပြီးဆောင့်ပစ်လိုက်နဲ့တစ်ချီပြီးပြီ ဆိုတော့မှ ပင့်သက်မောကြီးမျဉ်းချလိုက် ပြီးမျက်စေ့တွေမှိတ်လို့မှိန်းနေမိပာတော့တယ်။ဒါပေမယ့်.အရင်တုန်းကနဲ့ကွာနေ တာတစ်ခုကတော့ စောက်ရည်တွေပန်း ထုတ်ခာနီး အကောင်းကြီးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ အရင်တုန်းကတစ်ခါမှမတမ်းတ,ခဲ့မိဘူးပေမယ့်..အခုတော့.. ဆောင့် ဆောင့် မင်းမင်းရေ..တအားပစ် ဆောင့်လိုးပစ်..တအား တအား..အိုးဟို့. မောင့်လီးကြီးနဲ့ တအားပစ်ဆောင့်လိုးပါ. ဆောင့် ဆောင့်..အားဟာ့..အာ့..အာ့.အို့ လိုး လိုး လိုး…တအားဆောင့်လိုး… ” ဟင်းဟင်း..နင့်သားက နင့်ကိုလိုးမ လို့ဆိုပါလား..ခ်ခ် .နင့်ဖင်ကြီးဒီလောက် အယ်နေတာ သူနိုင်အောင်လိုးမှလိုးနိုင်ပါ့မလား ခ်ခ် ခ်ခ်. အစ်မ မြမြထွေးရဲ့အသံကြားတော့မှ တစ်ယောက်ထဲရှိတယ်ထင်ပြီးပြုံးနေမိတဲ့အပြုံးကိုမျက်နှာပိုးသပ်ပြီးသမင်လည် ပြန်လှည့်ကြည့်မိတယ်။
အိပ်ယာထ,နိုးခါ စ,ဆိုပေမယ့်သူ့အစ်မရဲ့မျက်နှာက ရွှန်းပ ကြည်စင်ဝင်းမွတ်လတ်ဆတ်နေလွန်းလို့ မနေ့ညကအလိုးမှခံခဲ့ရရဲ့လား လို့တောင် မှကြိတ်ပြီးတွေးယူမိတဲ့အထိပါပဲ။ ” ခိခိ..ဟုတ်ပါ့.မင်းမင်းတို့များ လုပ်ချ လိုက်တာ.ဟီဟိ.လိုးမှာပါဒေါ်လေးရယ်.. တဲ့..ခိခိ..” ဘာမှစိတ်မလှုပ်ရှားသလိုဟန်ဆောင် ပြီးရယ်ရယ်မောမောပြန်ပြောမိပေမယ့် သူ့လေသံကအဖျားခတ်ပြီးတုန်ယင်သွား သလိုလေးမို့ မမြထွေးကသဘောပေါက် လိုက်ပါပြီ။ ” အင်းလေ..ဟင်းဟင်း..နို့နံ့တောင်မ စင်ချင်သေးဘူး.သူ့ဒေါ်လေးကိုများစိတ် ကူးနဲ့လိုးပြီးနေပြီ ခိခိ..ပြောပါဦးဟဲ့..နင် ဘယ်လိုထင်လဲ..နင့်ဖင်ဆုံကြီးကိုသူနိုင် အောင်လိုးနိုင်ပါ့မလားလို..ခိခိ လိုးနိုင်လှ ရင် နှစ်ချီ…ဟီးဟီး.အများဆုံးတစ်ညလုံးလိုး သုံးချီပေါ့နော..ဘယ်ဖြိုနိုင်လောက် ပါ့မလဲ ” မိန်းမသားတွေစုမိတော့လည်းနှာကန် ပြီးနို့်ဆွဲစောက်ပတ်နှိုက်လိုးတဲ့အကြောင်း တွေချည့်ပဲ မြိန်ရည်ယှက်ရည်ပြောကြဆို ကြတာပါပဲ။ညီအစ်မချင်းလည်းဖြစ်နေ.. အလိုးခံဖူးတဲ့သူချင်းလည်းဖြစ်နေတော့ဒီ အကြောင်းမေးဖို့ဖြေဖို့ရာလည်းရှက်မနေ ကြတော့ပါဘူး။ ” ခိခိ..ဒီ် မမတော့လေ..ခိခိ..မျက်နှာ သစ်ဖို့တော့စိတ်မကူးဘူး..ဒီဖင်ကြီးကိုပဲ လာရန် ရှာနေတော့တာပဲ..ညီမလေးက ဖင်ကြီးကသာ မြင်သူတကာလိုးချင်လာ လောက်အောင်အယ်နေတာ..ဟီဟိ..ဟို စောက်ပတ်က ကျဉ်းကျဉ်းလေးပါ မမရဲ့.. ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ပာဘူး..သွားလေသူဆို လိုးလိုက်တိုင်းသူ့လီးဝင်အောင်လို့ မနည်းသွင်းပြီးလိုးသွားရတာချည့်ပဲ.ခုထိအပျိုတုန်းကလိုပဲ.ကိုမင်းလီးတုတ်တုတ် ခဲခဲကြီးနဲ့လိုးမယ်ဆိုရင်တော့စောက်ပတ် ပြဲသွားမလားပဲ..ခိခိ..အဟုတ်ပြောတာ.. သူ့လီးကအကြီးကြီး..ဟီးဟီး ” ပုခုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုတွန့်.မျက်ခုံးလေး ပင့်ပင့်ချီပြီးပြောနေတော့ မမြထွေးမယုံပဲ နေလို့မရတော့ဘူး..ရင်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့အုံ့ပုန်းနှာတွေကကြွတက်လာတယ်။ုံ့ ” စောက်ခေါင်းကျဉ်းတယ် ပြောစမ်းပါ ဟယ်..ဘယ့်နှယ်စောက်ပတ်ကျဉ်းတယ် လို့ပဲ..အဲဒါတော့မမတို့ကမျိုးရိုးလိုက်တာ နဲ့တူတာပဲ..မမစောက်​ခေါင်းလည်းကျဉ်း ကျဉ်းလေးဟဲ့..ကလေးနှစ်ယောက်သာ မွေးပြီးသွားတာ အခုထိကျဉ်းတုန်းပဲ.ခ်ခ် အဖိုးကြီး လီးသေးပြီးညတိုင်းမလိုးနိုင်လို့ လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်..ဒါနဲ့ နေပာဦး.. နင့်သားလီးက အတုတ်ကြီးလား..နင် ဘယ် လိုလုပ်သိ…အဲ ခိခိ..နင်အလိုးခံပြီးပြီ နဲ့ တူတယ်.ဟီးဟီး ” မော်မော် ရင်သိမ့်တုန်ဖြစ်သွားပြီးပုခုံး နှစ်ဖက်တွန့်လိုက်မိတယ်. ” ဟွန့်..မဦးမချွတ်ကြီး.ခ်ခ်..ဖွဟဲ့..မှန် ပါစေ..တည့်ပာစေ..လာလိုးပါစေ..ခ်ခ် .. မနေ့တုန်းကမမနဲ့သင်းသင်းထမင်းပွဲက ထ,ထွက်သွားကြတော့ ကိုင်ကြည့်မိတာ လေ မမရဲ့ ..ခိခိ..ဟောဒီလက်ကောက် ဝတ်လောက်ရှိတယ်..သိလား..သန်ချက် က တောင်မတ်နေတာများ ဆွဲညှစ်လို့မရ ဆွဲဆိတ်လို့်မရ.သံချောင်းတုတ်တုတ်ကြီး ကိုကိုင်လိုက်မိတဲ့အတိုင်းပဲ..အဲဒီလီးကြီး စောက်ခေါင်းထဲတိုးဝင်လာလို့တော့ဖြင့်. အားရလိုက်မယ့်ဖြစ်ချင်း..အဲ..မမ..ထမီ အောက်စ,လွတ်နေပြီလေ..အရည်တွေ ရွှဲလို့..ဆရာကြီးလီးရည်တွေလား ” မမြထွေးကသူ့စောက်ပတ်ကိုသူပြန်ငုံ့ ကြည့်ပြီး ” ဟုတ်ပါရဲ့..ရွှဲနစ်နေတာပဲ..အဖိုးကြီး က အရက်များပြီး လီးမတောင်နိုင်တော့လို့ ငါ့ကိုမလိုးတော့တာ ကြာလှပေါ့ ” ” အဲ. ” အဖေ့ဗျင်းချက်ကပြင်းသလားလို့မမေး နဲ့..နားရင်းတွေနားအုံတွေထဲ အသံတစ် စီစီမြည်နေအောင်ထွက်နေပြီးခေါင်းတစ် ခြမ်းလုံးများပွင့်ထွက်သွားပြီလားလို့ထင် ရတယ်။
သင်းသင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေအလည် လာပြီးအပြန်မှာကားဂိတ်ကိုလိုက်ပို့မယ် ဆိုတော့မင်းမင်းကိုခေါ်သွားတယ်လေ။ အဖေစိတ်မဆင်းရဲစေချင်လို့မလိုက်ပို့ချင် ပေမယ့် အစ်မတစ်ယောက်ထဲလွှတ်ရမှာ လည်းသဘာဝမကျလေတော့စိတ်ထဲမှာ အင်တင်တင်နဲ့ကားဂိတ်အထိလောက်ပဲ ဆိုလို့လိုက်သွားတာပါ။ကားထွက်သွား တော့သင်းသင်းကတစ်စခန်းထ,တယ်. ” မောင်လေး..ပပဝတီစတိုးဖက်ခဏသွားရအောင်ကွာ..မမအတွင်းခံဝယ်ချင် သေးတယ် ” မင်းမင်းကသူ့နို့ကြီးတွေကိုမျက်လုံးပြူး ကြည့်တော့ တစ်ခိခိရယ်ပြီး ” ခိခိ..တအားထွားနေတာကွ..အုံကြီးအပေါ်ထိကိုလျှံထွက်နေတာ..သုံးဆယ့် လေးနဲ့ မရတော့ဘူး..သုံးဆယ့်ငါး..သုံးဆယ့်ခြောက်လောက်မှအဆင်ပြေမယ်. ခိခိ..မျက်လုံးတွေကျွတ်ထွက်လာဦးမယ် ဟဲ့ ” ” ဟုတ်ပါဘူးဟာ.အဖေနဲ့တိုးနေမှာစိုး လို့ပါ..” ” ဟွန့်.နင်က ဒါကြီးတွေစိတ်မဝင်စား ဘူးပေါ့လေ.အခြောက်ကြီးလား.ဟလား. မောင်နှစ်မချင်းမို့လား..ဟင်းဟင်း. ဒါဆို ပြီးတာပဲ..” သင်းသင်းက မခံချင်သလိုဖြစ်လာလို့ စိတ်ကောက်ချင်လာတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးမဲ့ရွဲ့ပြီးပြောတော့ပြာပြာသလဲငြင်းရတော့တာပေါ့.. ” အာ.မခြောက်ပာဘူး.သိပ်စိတ်ဝင်စား တာပေါ့..တအားစိတ်လာတာပေါ့ဟာ.. ငါ နင့်နို့လုံးကြီးတွေကိုမှန်းပြီး ညတိုင်း ဒီလို ဒီလို စိတ်ဖြေနေတာ ခိခိ..” မင်းမင်းကဂွင်းတိုက်သလိုလုပ်ပြရင်း အမောတကောပြန်ပြောတော့မှသူ့အစ်မ မျက်နှာလေးပြန်ကြည်သွားတာ။မိန်းမတို့သဘာဝအတိုင်းယောင်္ကျားတွေရဲ့ဂရု စိုက်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုကြားလိုက်တော့ ပီတိဖြစ်သွားတာပေါ့။ ” ခိခိ..ဂွင်းတိုက်တယ်ပေါ့..ဟလား.. နင် တော်တော်ဆိုး.ခ်ခ်..တစ်ညဘယ်နှစ် ချီ ဆွဲလဲ..” သင်းသင်းကလည်းခေတ်ရဲ့သမီးပျိုပဲ လေ.မောင်နှစ်မချင်းမှာ..သူကအစ်မကြီးဆိုတော့မေးရဲ ပြောရဲတာပေါ့။ ” အိပ်ယာဝင်တစ်ချီ..တစ်ရေးနိုးတစ် ချီ..လင်းဆွဲတစ်ချီ..ဟီးဟီး..သုံးချီတော့အနည်းဆုံးပဲ..” စပ်စုချင်လို့မေးမိခါမှ တစ်တစ်ခွခွ တိ တိကျကျကြီးအဖြေရတော့ မင်းမင်းရဲ့လီး တောင်နိုင်စွမ်းကိုလန့်သွားမိတာနဲ့ မျက် လုံးလေးပြူးသွားပြီး. ” ညတိုင်းကြီးလားဟယ်..နင့်ဟာက လွန်လွန်းတယ်..ခိခိ..ငါ့တစ်ယောက်ထဲ မှန်းတာလား..ဒေါ်လေးတို့ အမေတို့ရော မပါဘူးလား..ဟီးဟီး..အမေကလည်းအ ကြီးကြီးနော..ခိခိ.နည်းတဲ့ဖင်ကြီးမဟုတ် ဘူး..အဖေတော့ အီဆိမ့်နေမှာပဲ..” ” အာကွာ..မမကလဲ.ဟီးဟီး..” မင်းမင်းကပြန်မဖြေပဲအရူးကွက်နင်း နေတော့ သင်းသင်းကအားမလိုအားမရ နဲ့လက်မောင်ကိုဖက်တွဲပြီးနို့ကြီးနဲ့ဖိကပ် ထားလိုက်ရင်း ” လာ..သွားမယ်.ပပဝတီကဒီဖက်မှာ အဖေတို့ကျောင်းနဲ့တစ်ခြားစီ..လမ်းသွား ရင်းပြောပြ..နင်အမေ့ဖင်ကြီးကိုငမ်း ငမ်း နေတာငါသိတယ်..ခိခိ ” လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတွေ့သမျှလူ တွေက သူတို့မောင်နှစ်မအတွဲကို စူးစူး စမ်းစမ်းကြည့်နေကြတော့ သင်းသင်းက ဂုဏ်ယူပြီးပျော်နေတာပေါ့။ကောင်လေး. ကောင်မလေးတွေတစ်ချို့ ကလည်းသူတို့ အနောက်ကကပ်လိုက်ပြီး ” ကျွတ်ကျွတ်..ကြီးလိုက်တဲ့ဖင်ကြီးကွာ ရမ်းခါနေတာပဲ..ဘဲကြီးကလဲနုထွားကြီး.. တစ်နေကုန် တစ်ညလုံးများဖင်ကုန်းခိုင်း ပြီးလိုးလိုက်ရရင် အီဆိမ့်နေမှာပဲ.အိပ်ယါ ပေါ်သေချင်သေပါစေတော့..ဟီး ” ” ခိခိ.ပြောလိုက်ရင် နင်တို့ယောင်္ကျား လေးတွေအတွက်ချည့်ပဲ..ဟင့်ဟင့်.ငါက နင်တို့ကိုခေါက်ပြီး အဲမောင်လေးနုနုထွား ထွားကြီးနဲ့ခုနစ်ညလောက်တောင် ငါ့ဖင် ကြီး ကုန်းပေးပြီးအလိုးခံပစ်ချင်တာ.ခိခိ” အမျိုးစုံအောင် လိုက်ကပ်ပြောနေကြ တော့ ရွတဲ့စိတ် တုန်လှုပ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့မို့သင်းသင်းကလက်မောင်းကိုမလွှတ်ပေး ရဲတော့ပဲဇွတ်ဖိကပ်ဆွဲထားရော။
ဖင်ချင်း ပေါင်လုံးချင်းက ခြေလှမ်းလိုက်တိုင်းပွတ် နေ ထိနေတဲ့အရသာကလည်းသူတို့နှစ် ယောက်လုံးကိုသွေးဆူစေတာပေါ့။စတိုး ရောက်တဲ့အထိ ဘာစကားမှပြောလို့မရ တော့ သူ့အမေအကြောင်းပြောချင် မေး ချင်နေတဲ့သင်းသင်းစိတ်ထဲမှာသိပ်အလို မကျလှဘူး။ အမျိုးသမီးအသုံးအဆောင်တွေချည့်ပဲရောင်းတဲ့စတိုးဆိုတော့ ယောင်္ကျားဆို လို့ သူ့တစ်ယောက်ထဲရှိတာလေ။နှာဘူး ကျချင်ပေမယ့် ကောင်မလေးတွေရဲ့ စပ် ဖြဲဖြဲ မျက်နှာတွေ..ရီဝေဝေမျက်လုံးတွေ ကို တာရှည်ရင်မဆိုင်ရဲတာနဲ့ ဆိုင်ရှေ့က ခွေးခြေပုလေးမှာထိုင်စောင့်နေပါမှအဖေ နဲ့ တည့်တည့်ကြီးတိုးတော့တာပဲ။သူ စာ သင်တဲ့ကျောင်းကဒီရပ်ကွက်ဒီလမ်းဖက်ွှမှာမဟုတ်ပေမယ့်.မြို့ နယ်ပညာရေးမှူးရုံး က ဒီနားမှာကပ်နေတာလေ။အစည်း အ ဝေးလာတက်ပြီး ရုံးထဲကပြန်အထွက်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် တည့်တည့်ကြီးတွေ့ကြ တော့ အဖေ့မျက်နှာကြီးရှုံ့ မဲ့ရဲတွတ်သွား တော့တာပေါ့။ ” မမရေ..ငါတို့ထွက်ပြေးရအောင်ကွာ. လာ..မြန်မြန်ထွက်..” သင်းသင်းကအူတူတူနဲ့သူ့လီးကိုငုံ့ပြီး ကြည့်တယ်.. ” ဘာဖြစ်တာလဲကွာ..လီးသိပ်တောင် နေလို့လား..လိုးချင်နေလို့လောနေတာလား..မမလည်း စိတ်လာနေ..” ” အာ..ကျွတ်..အဖေ ငါ့ကိုတွေ့သွားပြီ ဟ..ပညာရေးမှူးရုံးထဲကထွက်လာတာငါ မမြင်လိုက်မိဘူး..အဗျင်းခံရတော့မယ်.. တို့မောင်နှစ်မ.ထွက်ပြေးမယ်ကွာ..ငါ နင့်ကိုလုပ်ကျွေးမယ်..လိုးလည်းလိုးပေးမယ် ဟာ..လာ ” သွေးပူသွားတော့ ဆိုင်ကောင်တာမှာ သင်းသင်းငွေသွားရှင်းတာပေါ့။ကပျာက ယာနဲ့ကောင်တာကထွက်လာခဲ့ကြတော့ ဆိုင်ပေါက်ဝ,မှာတင်အဖေကကုတ်ပိုးဆွဲ ပြီးခေါ်လာတာ. အဗျင်းခံလိုက်ရပေမယ့်..တမင်သက် သက်ချိုးဖောက်စောကားခဲ့တဲ့အပြစ်မျိုးမဟုတ်မှန်းအဖေသိသွားတာကိုတော့ကျေ နပ်မိပါတယ်။အဖေပြန်ထွက်သွားတော့ အမေက မင်းမင်းအနားလာကပ်ထိုင်ပြီး ခေါင်းကိုရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းလို့ အကြာကြီးဖက်ထားတယ်။ဘာလို့မှန်းတော့မသိဘူး ရင်ထဲမှာလှိုက်လာပြီးမျက်ရည်တွေယိုစီးကျလာတယ်။အမေ့လက်ချောင်းအဖျား လေးတွေက မတော်တဆပဲလား..တမင် တကာလားတော့မဝေခွဲနိုင်ဘူး.သူ့ဂွေးဥ တွဲတွဲကြီးနဲ့ အချောင်းလိုက်ကြီးအိကျနေတဲ့လီးကြီးကိုမထိတစ်ထိနဲ့ဖွဖွဆော့ပေး နေတာထင်တာပဲ..ရွစိရွစိဖြစ်နေတယ်။လီးကြီးကတစ်ငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့မာတောင်လာပြီး စန့်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းမင်းရဲ့လက်တွေကိုအမေ့ပေါင်ပေါ်တင်ထားရာကပေါင်ရင်းကြားထဲပွတ်ထိုးလျှောဝင် သွားပြီ။
” အို အမေလဲငိုနေတာလား ဟင်..စိုရွှဲနေပြီ ” ” ဟင့်..စိုရွှဲနေရင်လဲ လက်ဖဝါးလေးနဲ့ ဖွဖွလေးသုပ်ပေးနေပါလား သားရယ်” ပောင်ကြီးဟ,ဖြဲပေးလာပြီးလက်အဖျား တွေကိုပါးစပ်ထဲငုံစုပ်နေတာက လီးရည် ကြည်လေးတွေများလား။ ” ဒီလိုလေးအမြဲနေချင်လိုက်တာ မေ ရယ်.သားကအမေ့အချစ်တွေ အကြင်နာ တွေကို မရတော့တာကြာလှပြီ. ” ဟုတ်မှာပါပဲ..ထွေးရဲ့ နို့လုံးစူစူမို့မို့ကြီး တွေ..ဖင်ကားကားကြီးတွေကိုသားလေး ခိုးခိုးကြည့်နေပြီလို့ မြထွေးသတိထားမိခဲ့တာတောင်တော်တော်ကြာသွားပြီလေ။ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြည့်လာတာက သိပ်တော့မကြာသေးပါဘူး။ကိုယ်ကလဲ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်လာတဲ့အချိန်မှပြခဲ့မိ တာဆိုတော့. ” သားချစ်တာမေသိတာပေါ့သားရယ်.. သိနေတာကြာလှပြီ..ခိခိ ” ပါးစပ်ထဲမှာငုံစုပ်နေတဲ့လက်ချောင်းက လေးတွေကမသိမသာနဲ့ဂွေးဥကြီးတွေဆီကိုမထိတစ်ထိရောက်သွားပြန်ပြီ။မထိ သလို ထိသလို..မပွတ်သလိုပွတ်သလိုနဲ့ ရွရွလေးပြေးနေတော့ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ဇတ်ကနဲ ဇတ်ကနဲ တွန့်တွန့်တုန်ထိုးပြီး ပေါင်ကြားထဲထိုးသွင်းထားတဲ့လက်ဝါးက စောက်ဖုတ်ကြီးကိုဖိဖိဆုပ်လာလိုက်တာ အိကနဲအိကနဲနေတာပဲ။လေးငါးမိနစ်အ ကိုင်ခံလိုက်တော့ စောက်ဖုတ်ကြီးရွလာ ချက်က ထမီတောင်ချွတ်ချပေးချင်စိတ် ပေါက်လာမိပြီ။သူ့လီးကိုကိုင်ပစ်ချင် စုပ် ပစ်ချင်စိတ်တွေကလည်းအုံကြွလာတော့အသက်ရှူသံပြင်းနေတဲ့ကြားက အမောတစ်ကော စကားခေါ်ပစ်လိုက်တယ်. ” ဟင်းဟင်း..သားလေးဂွေးဥကြီးက တွဲတွဲအိအိကြီးနဲ့အကြီးကြီးပဲ..တွဲကျနေ တာကြီးကချစ်စရာကြီး ခိခိ.ငယ်တုန်းကလိုတောင်ပါးစပ်ထဲငုံပြီးစုပ်ပေးလိုက်ချင် လာပြီကွာ ” အမေ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်တော့နီနီရဲ ပြီးချွေးသီးတွေဥနေပြီ။အထူးသဖြင့် နှာ ခေါင်းလုံးလုံးလေးတွေနဲ့အခြေပါးအိုးက နီရဲနေတာပဲ။မျက်လုံးတွေကရီဝေနေသ လား.ရွှန်းလဲ့နေသလား..ပါးစပ်လေးက မပွင့်တပွင့်ဟ,နေတာတော့သတိပြုမိပါ တယ်။သိပ်မလှမ်းမကမ်းမှာဒေါ်လေးနဲ့ မမသင်းကသူတို့သားအမိကိုအကဲခတ် နေကြတော့ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်သိပ်မ ရှိလှဘူး. ” သားကလည်း ငယ်တုန်းကလိုပဲ.. မေ့စောက်ဖုတ်ကြီးကိုအားရပါးရ ယက် ပေးပစ်ချင်နေတာ..မေ့စောက်စေ့ပြူးပြူး လေးကိုလျှာနဲ့ဖိရစ်ပြီးစုပ်ဆွဲပေးပစ်ချင် နေတာ..ဟွန့် မေ့စောက်ဖုတ်ကြီးက ဟို တုန်းကထက်တောင်မှပိုပြီးဖောင်းတက် အိစက်နေသေးတယ်..စောက်ရည်တွေ လည်းရွှဲလို့ ” မင်းမင်းကငယ်တုန်းကလုပ်ခဲ့ဖူးတာ တွေကိုတမ်းတမ်းတတပြန်ပြောနေတော့ မြထွေးကိုယ်လုံးကြီးဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ တွန့်ပြီးစောက်ရည်ကဝေါကနဲထွက်သွား တယ်။သူ့ယောင်္ကျားက ကျောင်းဆရာ. အသက်ကနှစ်ဆနီးပါးကြီးတာမို့စောက် ပတ်ယက်တာတို့..နို့စို့တာတို့လုပ်ပေးရ မှာရှက်လို့ဆိုပြီးတစ်ခါမှမလုပ်တော့သား လေးကိုပဲခေါ်ခေါ်ပြီးပေါင်ကြီးဖြဲလို့ယက် ခိုင်းခဲ့ရတာကိုး။
စိတ်ကတအားထ,လာ တော့ လီးကြီးကိုတအားစမ်းနှိုက်ပစ်ပြီး အားရပါးရဆုပ်ဆွဲညှစ်ပစ်မိတယ်..အား ဟား..အကြီးကြီးပဲ.. ” ယက်ပေးကွာ..မေ့ပေါင်ပေါ်ခေါင်းချ ဘေးစောင်းအိပ်ပြီးယက်.မေခြေထောက် ဆင်းပေးထားမယ်..” မင်းမင်းကိုရင်ခွင်ထဲထည့်ပြီးဖက်ထား ရာက နေရာပြင်ထိုင်ဖို့အသာထူမ,လိုက် ရင်းခြေထောက်ကိုဆင်းလိုက်တော့မျက် ဝန်းထောင့်မှာမော်မော်နဲ့သင်းသင်းတို့အ ရိပ်ကိုမြင်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ ဟန်မပျက်စေ ပဲ ခြေထောက်ကိုကွေးလိုက်ဆန့်လိုက် လုပ်နေရင်းကမော်မော့်ကိုတစ်ချက်လှမ်း ကြည့်ပြီး မျက်စေ့တစ်ဖက်မှိတ်ပြတယ်.. ” အား..ပေါင်လုံးတွေ ဆီးစပ်တွေက ကိုက်လိုက်တာမော်ရာ..ဟိုဟာများဆင်း ချင်နေလို့လားမသိပါဘူး..ဟီဟိ..” မော်မော်ကအလိုက်သိပေမယ့်သမီး ကအရိပ်အကဲနားမလည်ပဲပြေးလာတယ် လေ..စိတ်တိုလိုက်တာ.. ” သမီးနှိပ်ပေးမယ်အမေ..ဒါမှမဟုတ် နင်းပေးမယ်နော်..သမီးကိုယ်လုံးကိုခံနိုင် တယ်မလား..” ငိုရခက် ရယ်ရခက်နဲ့ မကျေမချမ်းဖြစ် နေရင်း အနှိပ်ခံလိုက်ရတော့မော်မော်က တစ်ခစ်ခစ်ရယ်တယ်။မင်းမင်းခမျှာတော့ လီးကြီးကိုလက်နဲ့ဆုပ်ပြီး ငုတ်တုတ်ထိုင် နေရရှာတာ သနားလိုက်တာ.. ” ခိခိ ခ်ခ်..ခုမှပဲရယ်နိုင်ပါတော့တယ် မမရယ်..နင့်အဖိုးကြီးကလဲ မစူးမစမ်းနဲ့ ကလေးကိုရိုက်လိုက်တာများ..ရွယ်တူဆို ငါစောက်ပတ်နဲ့မျက်ခွက်ပွတ်ပစ်မှာ..” ” အဲ..ဟိုက လျှာကြီးနဲ့ယက်ပစ်လိုက် မှ.ဆတ်ဆတ်ခါနေပါ့မယ် ညီမလေးရယ် ခိခိ ခ်ခ်..တော်ပါတော့ ခိခိ ” ညနေမိုးချုပ်တော့ အဖေကမူးပြီးပြန် လာတယ်။အရင်က ဒီလိုစည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ မသောက်ခဲ့ဖူးပေမယ့်ဒီနေ့တော့မင်းမင်း ကိုရိုက်ခဲ့မိတာစိတ်မကောင်းနိုင်လို့ထင် ပါရဲ့.တော်တော်မူးနေပြီ။လွယ်အိပ်ထဲမှာ သောက်လက်စ,အရက်ကတစ်ဝက်နီးနီး ကျန်နေသေးတယ်။အမေနဲ့မမသင်းက ဘာမှမပြောပဲ အမြည်းတွေဖွယ်ဖွယ်ရာရာလုပ်ပေးကြပေမယ့် ဒေါ်လေးကသူ့အ နားတစ်စက်လေးမှမကပ်ဘူး။တစ်နာရီ ကျော်ကျော် တစ်ယောက်တည်းဘာမှမ ပြောပဲလှိမ့်သောက်ပစ်တာအရက်ပုလင်း တစ်ပုလင်းလုံးကုန်သွားတယ်။ ” မင်းမင်း..” ” ဗျာ..အဖေ ” ” အဖေ့ကို စိတ်နာနေတာလား..အေ့ မုန်းနေတာလား..အဖေနောက်ကိုဘယ် တော့မှမရိုက်တော့ဘူးနော် ” မင်းမင်းကဘာမှပြန်မပြောတော့အဖေ ဝူးဝူးဝါးဝါးနဲ့စကားတွေအများကြီးပဲဆက် ပြောနေတယ်။နောက်ဆုံးတော့ ” ငါ့သား..ဒီနေ့ည အဖေနဲ့အိပ်ရမယ်.. အဖေ့ကိုချစ်ရင်..အဖေ့ကိုစိတ်မနာရင်.. အဖေနဲ့အိပ်..အဖေ့ကိုဖက်ပြီးအိပ် အဖေ နဲ့မင်းအမေကြားမှာအိပ် ဒါပဲ.လာ..အဖေ့ကိုလိုက်တွဲပို့ ” အမေနဲ့တစ်ယောက်တစ်ဖက်တွဲပြီးကု တင်ပေါ်တင်တော့ ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့ဇက် ကျိုးနေပြီ။
ကုတင်ပေါ်သေသေချာချာချ ပေးတော့ နံရံဖက်ကိုစောင်းလှည့်ပြီးအိပ် နေပေမယ့် ပါးစပ်ကဝူးဝူးဝါးဝါး..မွေ့ယာ ပေါ်လက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဘုံးဘုံးပုတ်ပြီး မင်းမင်းကိုခေါ်နေတာ။မင်းမင်း ကုတင် ပေါ်တက်လိုက်တော့အမေကညဝတ်ဂါ ဝန်တိုတိုလေးလဲဝတ်ဖို့ပြင်နေပြီ။သားအ ဖနှစ်ယောက်ဖက်အိပ်နေကြတာကိုတစ် ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးသူ့အင်္ကျီနဲ့ဘရာစီယာ ကိုတစ်ခါတည်းတွဲချွတ်လိုက်တာ နို့လုံးမို့ မို့ မော့မော့ကြီးတွေက ဖွေးကနဲအိကနဲ ပေါ်လာတယ်။ငယ်မူငယ်သွေးမလျော့မ ပျက်သေးတော့ လက်သန်းဖျားလောက် နို့ သီးခေါင်းမဲညိုညိုလေးတွေက ကော့ ကော့ထောင်ပြီးပြူးထွက်နေကြတယ်။သူ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မျက် စ,ပစ်ပြီး စို့မလားလို့မေးနေမှန်းနှုတ်ခမ်း အသွားအလာကိုမြင်လို့သိလိုက်တယ်။ “အင်း. စို့မယ်” လို့အသံထွက်သွားတော့ အဖေကဝူးဝူးဝါးဝါးအော်ပြန်ရော။အမေ ကတစ်ခိခိကြိတ်ရယ်ပြီး ဂါဝန်တိုတိုပားပား လေးကိုသူ့ခေါင်းကစွပ်ပြီးဝတ်လိုက်ရင်း ထမီကိုကွင်းလုံးပုံချွတ်ချပစ်တယ်။ပင်တီချွတ်နေရင်း ထမီကိုအခန်းထောင့်ထဲခြေ ထောက်နဲ့ခတ်ထုတ်ပစ်တော့ကုတင်ခြေရင်းဖက်ရောက်သွားတာပော့။ပင်တီလေးလှမ်းပစ်ပေးတာကိုမိအောင်ဖမ်းပြီး အား ရပါးရ ရှိုက်ခါနမ်းပစ်တော့မေကတစ်ခိခိရယ်ရင်းနဲ့စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီး လှန်ပြီးပုတ်ပြတယ်။ ကုတင်ပေါ်တက်လာတော့ အားရပါးရ ဖက်မယ်လို့လှည့်လိုက်. အဖေက ဝူးဝါး ဝူးဝါးအော်လိုက်.မို့လက်တစ်ဖက်နောက် ပြန်ပစ်ပြီးနို့လုံးကြီးကိုနယ်ပေးနေရင်းနဲ့ပဲ စိတ်လျှော့ရတယ်။အမေကတော့အေး အေးဆေးဆေးပဲ..သူ့ခါးကိုဆွဲလှည့်ပြီး ပက်လက်လှန်.ပုဆိုးဆွဲချွတ် လီးကြီးရော ဂွေးဥကြီးပါ စိတ်တိုင်းကျစုပ်တော့တာပါ ပဲ။လီးအချောင်းလိုက်ကြီးကိုလက်နဲ့ဆုပ် ပြီးလျှာနဲ့ရစ်ရစ်စုပ်လိုက် ညှစ်ညှစ်ကိုက် လိုက်နဲ့မရိုးမရွလုပ်နေတော့ မင်းမင်းမှာ ကော့ကော့လူးအောင်ခံနေရတာပေါ့။လ ဒစ်ပြူးပြူးကြီးအဖျားကိုလျှာဖျားနဲ့ယက် ဆော့တဲ့အခာများဆို လီးရည်တောင်ပန်း ထည့်ပစ်ချင်အောင်ကောင်းတယ်။ဂွေးဥ ကြီးတွေကိုသူ့လက်ချောင်းနုနုလေးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်အစုန်အဆန်ဖွဖွလေးဖိ ပွတ်ဆွနေတာများလီးချောင်းကိုထောင်း ကနဲ ထောင်းကနဲမော့တက်လာအောင် အရသာရှိတယ်။ဆယ့်ငါးမိနစ်..မိနစ်နှစ် ဆယ်လောက်ကိုယ်ကငြိမ်နေပေးလိုက် တော့ အဖေကအိပ်ပျော်သွားပြီထင်တာပါပဲ..ငြိမ်ကျသွားလို့အမေ့ဖက်ကိုအသာ လေးလှည့်လိုက်တယ်။
ဒီတော့မှပဲအမေ ကလီးစုပ်တာချွတ်ပြီးအပေါ်တိုးလာတာ။ မျကနှာချင်းဆိုင်မိတာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နှာထန်နေတဲ့မျက်လုံးကိုယ် စီနဲ့ကြည့်မိကြပြီး နှုတ်ခမ်းတွေအသည်း အသန်စုပ်နမ်းမိတော့တာပါပဲ။လျှာချင်း လူးပွတ်စုပ်ယက်နေတဲ့အရသာကစိမ့်နေ အောင်ကောင်းလွန်းတော့ အမေ့ဖင်ကြီး ကိုခွထားရာက ပေါင်ကြားထဲဒူးထိုးသွင်း ပြီးချဲလိုက်တယ်။အမေကလည်းဒါကိုပဲ မျှော်လင့်နေတာလားမသိပါဘူး.အလိုက် တစ်သိပဲပက်လက်လှန်ပြီး ဒူးချဲပေါင်ကွ ထားပေးလာတော့ ဖက်ထားလျက်နဲ့သူ့အပေါ်ကတက်ပြီးမှောက်လိုက်တာပေါ့။ ” ဘေးမှာ သားအဖေရှိတယ်နော်.. တစ်ချက်ချင်း..တစ်ချက်ချင်း ဖွဖွလေးပဲ ဆောင့်လိုး…နိုးသွားလို့တစ်ညလုံးအလိုးမခံလိုက်ရရင်အားမရဘူး ” ပေါင်ကြီးနှစ်ဖက်ဆွဲတင်ပေးရင်းလီး ကိုကိုင်ထားလျက်နဲ့ပြောနေတော့ ” ဟင့်. တေ့လိုက်တော့လေ.မေကလဲ..လိုးချင်လှပြီ ” ” အင့်..အင့်..ရော့ ကိုယ်တော်..အား ဟာ့..သူ့လီးကြီးကအကြီးကြီး..အူးဟူး.. စောက်ရည်တွေဒီလောက်ကြီးရွှဲနေတာ တောင်မှ ကျပ် ထုပ် ပြည့် သိပ် နေတာပဲ..အိုး.ကောင်းလှချည့်လားယောင်္ကျား ရယ်..အဲလိုဆွလိုးနေတာလေးကစောက် ခေါင်းထဲမှာအရသာတစ်မျိုးလေးကွာ.သူ့ လီးကတုတ်တော့ ပြည့်ပြည့်နင့်နင့်ကြီးနဲ့ သိပ်အရသာရှိတာပဲ…အင်း အင်း..အင့် ဟင့်.အင့်.အာ့ဟာ့ မကြမ်းနဲ့ဦးဆို..ခ်ခ်.. နိုးလာဦးမယ် လို့ မောင်ကလဲ ” လီးကအဆုံးထိမဝင်သေးဘူး။တဝက် ပိုပိုလောက်နဲ့ပဲ ပုံမှန်မှန်နဲ့ခပ်ဖွဖွအဝင်အ ထွက်ကောင်းကောင်းလိုးနေတာ။အမေ ကသူ့မျက်နှာကိုရွှန်းရွှန်းစားစားကြည့်ပြီး လီးကြီးကြီးနဲ့ အရသာရှိရှိနဲ့အလိုးခံနေရ တော့ တအားကျေနပ်နေတာပေါ့။ ” ဟွန့် ကြည့်နဲ့ကွာ..ယောင်္ကျား..ရှက် တယ်..ခိခိ..ကိုယ့်သားက ကိုယ့်လင်ဖြစ် ပြီး ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီးအလိုးခံနေရတာ..ဟင့်..သူ့လီးကလဲအကြီးကြီး ခိခိ.. အင့်..နို့စို့ရင်းလိုး..ဒါပဲနော် နေ့တိုင်းလာ လိုးပေးရမှာ..အာ့..ဖြည်းဖြည်းလိုးပါဆို. စို့..စို့. တစ်မြုံလုံးဝင်အောင်ထည့် စို့ ” လီးဆိပ်တက်ပြီးကြည်နူးနေတော့သူ့ နို့ လုံးကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖိညှပ်ပင့်ပြီး ပါးစပ်ထဲထည့်ပေးတာပေါ့။တစ်တောင် ဆစ်ကိုမွေ့ယာပေါ်ထောက် ပုခုံးနှစ်ဖက် ကိုဆွဲယူအားပြုပြီးမှောက်လျက်လိုးနေရ တာဆိုတော့ ခေါင်းငုံ့ပြီးနို့ စို့ရတာကသိပ် အဆင်မပြေလှဘူး။ဒါနဲ့ ဒူးထောက်ထိုင် လိုက်ပြီးပေါင်ကြီးတွေလက်မောင်းပေါ် တင်.နို့ ကြီးကိုကုန်းစို့ရင်း ပုခုံးဆွဲလိုးပေး လိုက်တော့ ဖင်ကမော့တက်လာတယ်။ စောက်ခေါင်းကလည်း လီးနဲ့ခွင်ကျကျ ဖောင်းအိပြီးတည့်တည့်ကြီးတန်းနေပြန် တော့ လီးကအရင်းနားထိစောက်ခောင်း ထဲတိုးဝင်သွားတာပေါ့။ ” အဲ့.. အာ့.ထိတယ်မောင်..ထိတယ် အားဟာ့..တအားထိတယ်..ကျွတ်ကျွတ် အောင်မယ်လေး..ကျွတ်ကျွတ်..ကောင်း လိုက်တာနော်..တအားကောင်းပဲ..ရှီး.. လိုး လိုး.ယောင်္ကျား..အင်း ကောင်းတယ် တအားကောင်းနေပြီကွာ..သွက်သွက် လေးဆောင့်ပေးစမ်းပါ..အင်း အင်း.အာ့ အူးဟူး အူးဟူး..ရော့ ရော့..အင့် ” နို့ စို့နေရတော့ စကားကမပြောအား ပြန်ဘူး။
စိတ်ထဲမှာကလဲပြောချင်မေးချင် နေတဲ့စကားတွေကအများကြီး။စောက် ဖုတ်ကိုလည်းလက်မလွတ်ချင် နို့ကြီးကိုလည်းလက်မလွှတ်ချင်..ဗျာများရင်းဖွဖွ လိုးပေးနေမိတာ နာရီဝက်ကျော်ကျော်.. တစ်နာရီနီးနီးတော့ရှိသွားပြီ။အမေ့မှာ လည်း တစ်သက်လုံးအခုမှပဲလီးကြီးကြီး သန်သန်မာမာ တောင့်တောင့်တင်းတင်း နဲ့ စိတ်လွတ်လက်လွတ်အလိုးခံဖူးရတာ ဆိုတော့ သွက်သွက်ဆောင့်ပေးလိုက်.. တစ်ချီပြီးလိုက်..သွက်သွက်ဆောင့်ပေး လိုက်.နောက်တစ်ချီပြီးလိုက်နဲ့ အနည်းဆုံး သုံးလေးချီလောက်ကော့တက်သွား အောင်ပြီးနေရပြီ။လီးက အရင်းထိဝင် အောင်မထည့်ရသေး..မဆောင့်ရသေးဘူး။အဲဒါနဲ့အမေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ မသိမသာနဲ့ လီးကိုအရင်းနားထိဖိထိုးထဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးကြီးပြူးပြီး အဲ့ ကနဲ အီးကနဲ အသံထွက်လာတယ်။နို့ စို့နေရာကခေါင်းထောင်ပြီးသူ့မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်တော့ ရင်ပတ်ကိုတစ်ဘုံးဘုံးထုပြီးနှုတ်ခမ်းကိုက်ပြတယ်.. ” သားအိမ်ထောက်တယ်ယောင်္ကျားရဲ့..သူ့လီးကဖြင့်အရှည်ကြီး..ငါအော်မှာ နော်..တအားဆောင့်ချင် သိပ်ဆောင့်လိုး ချင်နေတာပေါ့ ဟလား..ဟွန်း..ဖွဖွပဲလိုး. မဝ,သေးဘူး..” ” ဟင့်..တစ်ညလုံး လိုးပေးမှာပါမိန်းမ ရာ..ဒီလောက်စီးပိုင်ပြီး ဒီလောက်ကြီး လိုးလို့ကောင်းအောင် ရွှဲအိကျပ်ထုပ်နေတဲ့စောက်ပတ်မျိုးကြီးမို့အားရပါးရကြီးကို ပစ်ဆောင့်လိုးပစ်ချင်လို့ပါ..နော် မိန်းမ ” သူ့စောက်ပတ်ချီးမွမ်းသံကြားရတော့ မြမြထွေးပီတိတွေလျှံသွားတယ်။အရင်း ထိမဝင်သေးပဲနဲ့တောင်ဒီလောက်ကြီးထိ အရသာရှိနေရင်..ကဲ လိုးပေတော့…လို့ မြမြထွေးစိတ်ဒုံးဒုံးချပြီးခေါင်းအုံးအစွန်း ကိုပါးစပ်ထဲအပြည့်သွင်း ကိုက်ရင်းမျက် စေ့တစ်ဖက်မှိတ်ပြလိုက်တယ်။မင်းမင်း က တစ်ချက်လွှတ်ဆောင့်ကြမ်းပစ်တာမ ဟုတ်လို့တော်သေးတယ်ပြောရမှာပဲ။ရစ် တစ်ရစ်တစ်နဲ့ဖိဖိပြီးသွင်းလာတော့ မြမြ ထွေးခမျှာခေါင်းခါခါလည်ခါခါနဲ့တအား ပစ်အော်တော့တာပေါ့..ခေါင်းအုံးကြီးခံ နေတာတောင်အသံက အူးအူးအားအား နဲ့လွင့်ထွက်လာလို့ မင်းမင်းကလက်ဝါးနဲ့ ဖိပိတ်ပေးထားရတယ်။ဆီးခုံချင်းဖိဖိကပ် ပြီးညှောင့်ညှောင့်လိုးပေးနေတာအချက် နှစ်ဆယ် အစိတ်လောက်အလိုးခံလိုက်ရ ပြီးတော့ မြမြထွေးအရသာသိသွားပြီ။ဒီ တော့မှ ” လိုး..ယောင်္ကျား..ကောင်းတယ်. လိုး လိုး တအားဆောင့် ဗိုက်ကြီးအောင် လိုး လိုး လိုး ” ” ဟင်းဟင်း..ဘယ်လိုလဲ မမရဲ့..ခိခိ.. လီးကြီးကြီးကော့ကော့တုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ တစ်ညလုံးအလိုးခံထားရလို့မျက်စေ့မဖွင့် နိုင်တော့လောက်အောင်ကိုဘဝင်မြင့်နေ တာလား..ခ်ခ်.” မနက်လင်းလို့ မော်မော်အိပ်ယာ ထ, ပြီးမျက်နှာသွားသစ်တဲ့အချိန်ထိသူတို့က လိုးလို့ကောင်းတုန်း။
လိုးသံ ဆောင့်သံ ညည်းသံ အော်သံတွေ တော်တော်ကြီး သွက်နေ.ကျယ်နေပြီဆိုတော့.ပြီးခါနီးနေ ပြီပဲလို့မော်မော်ခန့်မှန်းမိလိုက်ပါတယ်။ မျက်နှာသစ်တာ အိမ်သာတက်တာနဲ့နာ ရီဝက်ကျော်ပြီး အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာခဲ့တဲ့အ ချိန်ထိ မမမြထွေးထွက်မလာသေးလို့ သူ့ အခန်းထဲသွားကြည့်တာပေါ့။ကုတင်ပေါ် မှာတုံးလုံးကြီးနဲ့ပက်လက်လှန် မျက်စေ့ မှိတ်ပြီးကျေကျေနပ်နပ်ကြီးပြုံးနေပုံကြီး က မနာလိုချင်စရာကြီး။ဒါနဲ့ ကုတင်ခြေ ရင်းကထမီတစ်ထည်ကောက်ယူပြီး သူ့ အစ်မကိုယ်ပေါ်လွှားပေးလိုက်တော့မျက် စေ့လေးမှေးမှေးဖွင့်ကြည့်လာတာမို့မျက် စောင်းလေးထိုးပြီး တိုးတိုးပြောပစ်လိုက် တယ်။နံဘေးမှာ ခဲအိုကမူးမူးနဲ့အိပ်ပျော် နေတုန်းပဲဆိုတော့ လိုးလဲလိုးရဲတဲ့ သား အမိပါလား လို့အံ့ဩမိတယ်လေ။ မမြထွေးအိပ်ယာကထ,လာပြီးမျက်နှာ သစ်ဖို့ရေတိုင်ကိုသွားတော့မှ မီးဖိုပေါ်ရေ နွေးအိုးလေးတင်ခဲ့ပြီးအနောက်ကလိုက် သွားတာပေါ့။သိချင်ဇောက ကြီးနေပြီ.. နှာကြီးတယ်ပြောပြော..စောက်ပတ်ယွ တယ်ပြောပြော..မင်းမင်းလိုးချက်တွေကို သိချင် စပ်စုချင်နေတာတော့အမှန်ပဲ။ ” မမ.ဘယ်နှစ်ချီလိုးသွားလဲ..တစ်ည လုံးလိုးတာလား..လီးကအကြီးကြီးနော်. ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလိုးသွားလဲ..လီးရည် တွေအများကြီးပဲလား..နင့်စောက်ပတ် ထဲမှာပန်းထည့်ခိုင်းတာလား.အပြင်.. ” မြမြထွေးကရေတစ်ခွက်ခပ်ပေးပြီးသူ့ ပါးစပ်နားမှာလာတေ့ထားတယ်။ဒီတော့ မှတစ်ခစ်ခစ်ရယ်ပြီး ” ဟီး..ငါသိချင်လှပြီဟဲ့..ပြောပြ ပြော ပြ..အကုန်ပြောပြဟာ..” ” နင့်သား.နင်သွားမေးပါလား.ငါစကားမပြောနိုင်သေးဘူးဟဲ့..တစ်ညလုံးသူလိုး ကိုယ်လိုး..ပယ်ပယ်နယ်နယ်လိုးထားလို့ ရင်ထဲမှာတစ်လှပ်လှပ်နဲ့ခေါင်းတွေမူးနေတုန်း.ခိခိ..” ” အာ..ပြောပြပါမမရာ..ဈေးကိုင်နေ လိုက်တာနော်..သေချင်ပါတယ် ” “နင်သိချင်ရင် နင့်သားကိုသွားမေး.. ဒါမှမဟုတ်..နင်ကိုယ်တိုင်အလိုးခံလိုက်.. ခိခိ..အဲဒါပိုကောင်းတယ်..ဟိုက နင့်ကို လီးကြီးကြီးနဲ့လိုးပြလိမ့်မယ်..သွား ခိခိ ” မော်မော် စိတ်ကောက်ချင်စိတ်ပေါက် သွားတယ်။မင်းမင်း လိုးအားသန်ပုံကိုသူ သိပ်သိချင်နေတာလေ..လစ်ရင်အလိုးခံ ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကိုး.. ” ဟင်း..လီးကြီးတာများကြောက်မယ် ထင်လို့လား.ဝေးပါသေးရဲ့. ခ်ခ်..တအား ကြီးလေလေ..မိမော်ကကြိုက်လေလေပဲ .ဟီးဟီး .စောက်ပတ်ကြီးပြဲလန်စုပ်ပြတ် သွားအောင်လိုးလဲ မိမော်တို့ကကြိုက်နေ မှာပဲ.လီးတုတ်တုတ်ကြီးကိုစောက်ခေါင်း ထဲတစ်နေကုန်မြှုပ်ပြီး ဆွဲစုပ်ရင်းငြိမ့်နေမှာ..ခိခိ..” လီးနဲ့ခြောက်လို့လည်းမကြောက်ဘူး ဆိုတော့ မြမြထွေးကဘေးဘီကိုမျက်လုံး ဝေ့ကြည့်ပြီးတစ်တစ်ခွခွကြီးပြန်ပြောပြရ တော့တာပေါ့။
လီးစုပ်ပေးမိတာကစ,ပြီး ပြောပြလိုက်မိတာ ” ပထမအချီလိုးပြီးကတည်းကကိုယ် က လေးငါးချီလောက်ပြီးနေပြီ..ခိခိ..ငတ် နေတာကလည်းကြာပြီလေဟယ်။သူ့လီးကြီးကလဲစောက်ခေါင်းထဲ ဝင်တိုင်းထွက် တိုင်း ပြည့်ပြည့်သိပ်သိပ်ကြီး ထိထိမိမိထိုးခွဲနေတာဟဲ့..ပြီးတာလဲမပြောနဲ့။သိပ် ကောင်းတာကိုး..ပြီးတော့လဲ သူ့လီးဖျား ကော့ကော့ကြီးကစောက်စေ့အမြစ်ခြေကိုအဝင်ကော်..အထွက်ကော်နဲ့ အမြဲပဲ ကော်ကော်ပြီးဆွပေးသလိုလိုးနေတော့ အရသာကတအားရှိတာနဲ့စိတ်ကလွတ် လွတ်သွားရတာများတယ်။ဒါကြောင့်လဲ ခဏခဏပြီးနေရတော့တာပေါ့..” ” ဟင့်. ဟင့်..မမရယ်..အဲလောက် ကြီးကောင်းနေရင် ငါလဲပြီးမိမှာပါပဲ.အခု နင်ပြောပြတာလေးနဲ့တောင်မှ ငါစောက် ရည်တွေရွှဲနစ်နေပြီ..” မြထွေးကဘေးဘီကိုဝေ့ဝဲကြည့်ပြီး မော်မော့်ကိုထမီလှန်ပြခိုင်းတော့မော်က လည်းမရှက်ပါဘူး။ရေစည်ကိုကျောမှီပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ဖင်ချထိုင်လို့ ထမိအောက် စ,ကိုပေါင်ရင်းအထိဆွဲတင်လှန်ပြပေးပစ် လိုက်တယ်။ပေါင်ကြီးတွေဖြဲ ကားထား တာဆိုတော့သန်စွမ်းထူပြိန်းလွန်းလှတဲ့ စောက်မွှေးမဲနက်နက်တွေအကြားမှာ န ခမ်းသားတူတူရဲရဲကြီးတွေဟ,ကွဲကွဲလေး နဲ့လက်သန်းဖျားလောက်ပွင့်နေတဲ့မော့် စောက်ခေါင်းပတ်လည်မှာရော ပေါင်ခြံ ကြားတွေမှာပါစောက်ရည်ဖြူတွေရွှဲစိုအိ နေတာ ကုန်းပြီးယက်ပစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေ တောင်မှတစ်ဖွားဖွားဖြစ်နေမိတယ်။ ” လှလိုက်တဲ့ ငါ့ညီမလေးစောက်ပတ် ကြီးဟယ်..တကယ်ပါပဲ..အပျိုစင်စောက် ပတ်လေးလိုဖူးအိဖောင်းကား မို့တက်နေ တာပဲ..နင့်သားတော့ နင့်စောက်ဖုတ်ကြီး ကိုကောင်းကောင်းယက်ပြီး နေ့မအိပ်ည မအိပ် လီးမချွတ်ပဲလိုးတော့မှာငါမြင်နေပါ သေးတယ်..လှလိုက်တာဟယ် ” မော်မော် ထမီပြန်ဖုံးပစ်ချင့်တဲ့စိတ်မရှိ တော့လောက်အောင်နွမ်းခွေသွားတော့ ရေစည်လေးကျောမှီရင်းစောက်ဖုတ်က ဟောင်းလောင်းနဲ့ပဲထိုင်နေလိုက်မိတော့ တယ်။ ” သူ တစ်ကယ်ပဲ မမစောက်ပတ်ကြီး ထဲက လီးကိုမချွတ်တမ်းလိုးသွားခဲ့တာလား ဟင်..တအားကြီးကို လိုးအားသန် တာပဲနော်..တစ်ညလုံးတစ်ပြွတ်ပြွတ်လိုး နေတာပဲလား.လီးမချွတ်တော့ဘူးလား ” မြမြထွေးက ဘေးဘီကိုကြည့်လိုက် ပြန်ပြီးမော်မော့်ရှေ့ မှာဖင်ချထိုင်ရင်းထမီ ကြီးကိုပေါင်ရင်းအထိလှန်ပြပြန်တယ်။ အူးဟူး..မမစောက်ပတ်နခမ်းထူထူကြီး တွေက နီညိုရောင်သွေးခြည်လျမ်းနေပြီး ကားလန်ပွင့်အာ ဖူးရောင်ထွက်သွားတာ စောက်ခေါင်းပွင့်အာအာကြီးကိုတောင်မှ ခပ်ဟ,ဟကြီးမြင်နေရတာပါလား.. ” ဒီမှာကြည့်.. တွေ့လား..နင့်သားက လီးမချွတ်တမ်းလိုးသွားတာ..သူ့အမေမို့ ချစ်လို့ဖွဖွလေးလိုးပေးတာပါတဲ့..ခိခိ သူ ကတော့ ဖွဖွလေးလိုးတာပါပဲ..သူ့အမေ စောက်ခေါင်းကတော့ အခုထိသူ့လီးကြီး ထိုးဖွင့်သွားတဲ့အတိုင်း ပြန်တောင်မစေ့ နိုင်သေးဘူး..ခိခိ..” မော်မော့်မျက်စေ့အကြည့်ကစောက် ခေါင်းကြီးပွင့်အာနေတာကိုကြည့်လို့မဝ, နိုင်တော့ဘူး။
အဲလောက်စောက်ခေါင်း ကြီးပွင့်နေရင်သူ့လင်ဗိုလ်မှူးလီးလောက် တော့ လျှောကနဲ လျှောကနဲ နေမှာပဲလို့ တွေးနေမိသေးတယ်။ ” မမရယ်..အားရပါးရကြီးအလိုးခံပစ် တာပါလားနော်..အားကျလိုက်တာကွာ.. မော့်ယောင်္ကျားဆို အဲလိုပွင့်နေအောင် တစ်ခါမှမလိုးဖူးဘူး..တစ်ညလုံးတော့အ လိုးခံခဲ့ရဖူးပါရဲ့..အဲလိုမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ” ” တအားဆောင့်လိုးတာဟဲ့..တကယ် အရသာရှိတာ..သူ့လိုးအားကတအားဆို တအားကို သန်တာ..အခုမှဆယ့်ရှစ်နှစ် ထဲမှာလေ..လိုးနိုင်တာပေါ့..ဒုတိယအချီ ကုတင်စောင်း ဖင်တေ့ပြီးခံရတာလေး ကြားချင်သေးလား ” ” ပြော. ” ” နေ့တိုင်းလာလိုးပါဆိုမှ..ပြော..ဘာ သဘောနဲ့မလာတာလဲ..မိန်းမက အပေးမကောင်းလို့လား ဟလား…ဒါမှမဟုတ်. ဒီစောက်ဖုတ်ကကျယ်နေလို့လား ” အဖေက နောက်နောင်ဘယ်တော့မှမဗျင်းတော့ပါဘူးလို့ကတိပေးခဲ့ပေမယ့်သူ့ စိတ်ဖြေသိမ့်စေချင်တာကတစ်ကြောင်း.. မေ့စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလိုးလို့မဝ,နိုင်သေး တာနဲ့ လိုးလို့အရမ်းကောင်းလွန်းတဲ့ မေ့ စောက်ဖုတ်ကိုချည့်ပဲနေ့ရော ညရောလူလစ်ရင်လစ်သလိုနေ့တိုင်းပိတ်လိုးနေတဲ့အပြင်..မေကလည်းပေးလို့မဝ,သေးတာ ကတကြောင်း.ဒေါ်လေးကသူ့အစ်မလစ် တဲ့အချိန်လာခဲ့ဖို့မှာထားတော့အမေ့ရဲ့အလစ်ကိုချောင်းနေရတာကတစ်ကြောင်း ပေါ့လေ။အဲလိုအကြောင်းတွေကရှုပ်နေ လေတော့..သူနဲ့အလိုးခံချင်လွန်းလို့ လာ နိုး..လာနိုးနဲ့မျှော်နေတဲ့အိဖြူဆီမရောက်ုဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒီနေ့တော့ရုံးတွေကျောင်းတွေပိတ်တဲ့နေ့မို့နေ့လည်ပိုင်းမေ့ကိုလိုးရဖို့အ ခွင့်အရေးသိပ်မမြင်ဘူး။လင်းဆွဲလေးပြီး တော့ဒေါ်လေးရဲ့အခန်းကိုလစ်ဖို့စိတ်ကူးနဲ့အိပ်ယာထဲဝင်နှပ်ပြီးအားမွေးနေလိုက် တယ်။ဒေါ်လေးပုံကလင်ရဖူးတယ်ဆိုပေမယ့် ဘော်ဒီကအပျိုကြီးပုံစံတစ်စက်မှမလျော့တော့သူ့ကိုမြင်လိုက်တိုင်းလိုးချင် စိတ်တွေချည့်ပဲဖြစ်နေမိတာအမှန်ပဲ။အိပ် ယာထဲမှာဝင်နှပ်နေတုန်းအဖေက ” အပြင်မှာ ကိုမြဝင်းသားလေးစောင့် နေတာကြာပြီသားရ..သူ့အမေမွေးနေ့ဆို လား အစ်မမွေးနေ့ဆိုလား..အဲဒီအတွက် သားကိုလာခေါ်တာတဲ့.သွား သွား.လိုက် သွား ငါ့သား..” အဖေကကြည်ကြည်ဖြူဖြူလွှတ်နေတဲ့အပြင်..ပြည့်စုံရဲ့အော်သံကလည်းငှက် ဆိုးသံထက်ဆူညံအောင် ကြားနေရတာ မို့မျက်လုံးလေးပွတ်ပြီးအပြင်ထွက်လာခဲ့ တာပေါ့။ ” ဟ..သားရီးရ..ကြာလှချည်လားကွ. ဖင်သနပ်ခါးလိမ်းနေတာလား..အုန်းဆီရွှဲ ရွှဲလေးလိမ်းခဲ့ကွာ..ဟီးဟီး ” ပြည့်စုံဆိုတဲ့ကောင်ကအဲလိုပါဆို.သူ့ အမေကိုလိုးလို့လိုးနေတဲ့သူမှန်းလဲမသိ.. သူ့အစ်မကိုလိုးမယ့်သူမှန်းလဲမသိ..သားရီး သားရီး လုပ်နေတော့အမြင်ကပ်လာ တယ်။ ” လာပြီဟ..လာပြီ..မင်းအစ်မစောက် ပတ်ယားနေတာကိုလာလိုးပေးခိုင်းလို့ ဒီ လောက်လာအော်နေရတာလားဟ..လိုး ပေးမယ် လိုးပေးမယ်..လာပြီ ငါ့သားရ..” အခန်းထဲကထွက်လာတော့ဧည့်ခန်း မှာပြည့်စုံရော ဖူးအိပါစပ်ဖြီးဖြီး ရယ်ကျဲ ကျဲ နဲ့ထိုင်နေကြပြီး.အမေကဧည့်ခံနေတာတွေ့တယ်။
မျက်နှာပူပူနဲ့ဝင်ရောပစ် တော့ ” သားကလဲကွယ်..မဟုတ်တာတွေ အော်နေလိုက်တာ..နားရှက်စရာ ကဲ ကဲ လိုက်သွား လိုက်သွား..ခိခိ ပြည့်စုံကလဲမင့် သားရီးကိုဂရုစိုက်ခေါ်သွားနော်..ခ်ခ် သူကညဆိုရင်ဗိုက်ဆာတတ်တယ်နော.. ညစာလေး ဘာလေးလည်း ကြိုပြီးလုပ် ထားပေးမှ..ခိခိ ” ” ရတယ် အန်တီ..စိတ်ချ ဟီးဟီး..ည စာတော့ သားတို့အိမ်မှာအပြည့်ပဲ.. မြက် တွေရိတ်ကျွေးပစ်မယ်.မြက်ခင်းထူထူကြီး တွေ နှစ်ခင်းရှိတယ် အန်တီရဲ့..ခိခိ ” ဖူးအိကရယ်ကျဲကျဲလုပ်နေတာနဲု့ပြည့်စုံ လက်မောင်းကိုအရှက်ပြေလေးလက်သီးနဲ့တစ်ချက်ထိုးပြီးလိုက်လာခဲ့တယ်။ပြည့် စုံကကားကိုမောင်းတာဆိုတော့ကိုယ်က အနောက်ခန်းမှာပဲတက်လိုက်တာပါ..အဲ ဒါကို ဖူးအိကသူ့မောင်လေးနံဘေးမှာ မ ထိုင်ပဲ နောက်ခန်းကိုလိုက်တက်တယ်။ ” အေး..ရှေ့ခန်းကတော့လာမစီးပဲနဲ့. နင် နာတော့မယ်နော်..မမ..သားရီးက တစ်ကယ်တီးတာ..သူ့ဂေါ့ကတုတ်တုတ် ခဲခဲ.အကြီးရီး..ဟီးဟီး..ငါထက်ပိုကြီးတာ နော. ” ” ဟာကွာ..ဟီးဟီး. ” ” ဘာရီးလဲဟ..ဘာလဲ ဂေါ့ ဆိုတာ.. ခိခိ..ဘာ ဂေါ့ရီးလဲ.ဟီးဟီး ” ဖူးအိက နားမလည်သလို မသိသလို ကြောင်တောင်တောင်မျက်နှာပေးနဲ့မေး နေတော့ ပြည့်စုံကစောက်မြင်ကပ်ကပ်နဲ့ ” လီး ပြောတာဟေ့..လီး လီး..သိပြီ လား..အဲကောင်လီးကအကြီးရီးဟဲ့..နင့် လက်ကောက်ဝတ်လောက်ကြီးဗျ..ငါ့လီးထက်နှစ်ဆလောက်ရှိတယ်..” ” ဟဲတော်..ခ်ခ် ခိခိ..သေပါပီ…ဟဲ့.. ဟိုဖက်တိုး.ဟိုဖက်တိုး..အဲလောက်ကြီးဆိုရင်တော့ ခ်ခ် ခိခိ. ငါသေလိမ့်မယ် ” ပါးစပ်က ဟိုဖက်တိုးဆိုပြီးသူ့လက်က မင်းမင်းလက်မောင်းကိုသူ့ဖက်အတင်းပဲ ဆွဲထားတယ်။နောက်နေသလိုနဲ့အတည် ကြီးဆွဲကပ်ထားတော့ပူးကပ်ပြီးထိုင်နေရ တော့တာပေါ့။အရင်ကလဲ နောက်သလို ပြောင်သလို အတည်လိုလိုနဲ့နေခဲ့ကြတာ ဆိုတော့မဆန်းလှပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ သူ့စောက်ပတ်ကိုလိုးပေးမယ် လို့သူ့ရှေ့ မှာအော်ပြောထားခဲ့တာဆိုတော့ ထိုင်ရ တာကခပ်ရှိမ်းရှိမ်းပဲ။
ဖူးအိ ကတော့သိပ် မဆန်းသလိုပဲ။စောစောက ပြည့်စုံပြော နေတဲ့ပုံအတိုင်းဆိုရင်တော့ သူတို့မောင် နှစ်မချင်းတောင်လိုးပြီးကြပြီထင်တာပဲ ။ ကားအရှိန်မြန်နေလို့ ကိုယ်ကိုထိန်းတဲ့ ပုံ မျိုးချိုးပြီးသူဆွဲထားတဲ့ဖက်ကလက်ဝားကို သူ့ပေါင်လုံးကြီးပေါ်ထောက်လိုက်တော့ ပြီတီတီနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးပေါင်ကိုခပ်ဟ,ဟချဲပေးလာတယ်။သူ့ဆီးခုံပေါ်လက်သန်း လေးနဲ့ပဲခပ်ရွရွပြေးဆော့နေတော့ သူက သိပ်ကျေနပ်ပုံမပြလှဘူး.. ” ခိခိ နင်ကသာ အထင်ကြီးနေတာပါ မောင်လေးရယ်..ငါတော့ လက်သန်း လောက်ပဲရှိမယ်ထင်တာပဲ..ခိခိ..အယား မပြေတဲ့အပြင် ဒါလောက်လေးနဲ့ဆိုရင် ပို ပြီးတော့တောင် ယားလာသေး ခိခိ..” မောင်နှစ်မ နှစ်ယောက်တစ်ဟီးဟီး တစ်ဟားဟားရယ်နေပုံကြည့်ရတာတော့ သူတို့လိုးပြီးကြတာသေချာပါပြီ..လို့တွေး နေတုန်းကားကသူတို့အိမ်ဝင်းထဲဝင်လာ တယ်။ကားပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်း အိဖြူ ကဣန္ဒေတြောင်မဆည်နိုင်ဘူး.အူယားဖားယားပြေးလာပြီးအတင်းဆွဲခေါ်တာ။ အိမ်မှာဘာမွေးနေ့မှလည်းမရှိပဲနဲ့သူ့သား သမီးတွေလွှတ်ပြီးခေါ်ခိုင်းတာပါ ။ဧည့် ခန်းမှာဦးမြဝင်းကအရက်သောက်ရင်းသူ့ သားသမီးတွေနဲ့ဟိုပြောဒီပြောရစ်နေတုံး အိဖြူကဖဲထုပ်လေးချပေးခဲ့ပြီးအိပ်ခန်းထဲဆွဲခေါ်လာတယ်။ပြည့်စုံတို့ကလည်း သူ တို့အဖေဆီကဖဲလိမ်ရိုက်ပြီးပိုက်ဆံရဖို့ပဲ အာရုံရောက်နေတော့ လှည့်တောင်မှ မ ကြည့်ကြပါဘူး။ ” အာ..ဟိုနေ့က မိန်းမနဲ့လိုးပြီးအိမ် ပြန်ရောက်တော့ နှစ်ရက်နဲ့တစ်ည ပြန်မ အိပ်ပဲပျောက်နေလို့ဆိုပြီးအဖေကဗျင်း ထဲ့လိုက်တာ..ဖျားတောင်ယူရတယ်မိန်း မ ရာ…” လို့အစ,ချီပြီးအမှန်တစ်ဝက် အ ပိုတစ်ဝက်ပြောပြလိုက်တယ်။ဒီတော့မှပဲ ” အို..အဖျားကြီးနဲ့လိုက်လာတာလား မသိလို့ပါယောင်္ကျားရယ်.ဖြူ့ ကိုစိတ်မဆိုး နဲ့နော်..မှန်း ပြရမ်း နဖူး ” နဖူးဆီရောက်လာတဲ့လက်ကိုဆွဲပြီး လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်ရင်း ” ဒီ လီးကြီးအဖျားက ကြီးနေတာ မိန်းမရ..လဒစ်ကြီးပြူးပြီးကြီးနေတာ ” အိဖြူက လဒစ်ပြူးပြူးထွတ်ထွတ်ကြီး ကိုလျှာနဲ့ရစ်စုပ်လိုက်.နှုတ်ခမ်းမွှာတွေနဲ့ တေ့စုပ်လိုက်လုပ်နေပြီးအခန်းအပြင်ကို ထွက်သွားတယ်. ” အစ်ကိုကြီးတို့ သုံးအိမ်ပဲဆော့တော့ နော်..မင်းမင်းကဖဲမဆော့တတ်တော့နား အေးပါးအေး ချက်စ်ထိုးရင်းအိဖြူပဲ ဧည့်ခံထားလိုက်မယ် ” အိဖြူအခန်းထဲပြန်ဝင်လာတော့သူတို့ လင်မယားအိပ်တဲ့ကုတင်ပေါ်မှာမင်းမင်း တုံးလုံးကြီးချွတ်ပြီး လီးကော့ကော့ကြီး ကို မော့မော့ကြီးအသင့်ထောင်ထားပေး ပြီးစောင့်နေပြီ။သိပ်တောင့်တနေရတဲ့ ဒီလီးကြီးကို အားအင်ပြည့်ပြည့်ဝဝကြီး နဲ့ အကြောပြိုင်းပြိုင်းတွေဖူးကြွဖေါင်းတက် နေအောင်မတ်မတ်ကြီးတောင်နေလျက် အားရပါးရကြီးမြင်လိုက်ရတော့ နှာတွေ တအားပွတက်လာပြီးချက်ချင်းကြီးတက် ထိုင်လိုးပစ်လိုက်ချင်စိတ်ဖြစ်မိတယ်။ဟို နေ့က ညနေပိုင်းမှာသူအိမ်မပြန်ခင်နှုတ် ဆက်လိုးတော့..စောက်ရည်မရွှဲသေးပဲ အလိုးခံလိုက်မိတာသူ့စောက်ပတ်နခမ်းသားထူထူကြီးတွေ ရောင်ကိုင်းဖူးတက် သွားလို့ လူမသိသူမသိတိတ်တိတ်လေး ကျပ်ပူကြိတ်ထိုးခဲ့ရတာသတိရသွားမိပြန် တော့ ဇွတ်ကြီးထိုင်မလိုးချရဲပြန်ဘူး။
ဒါနဲ့ စောက်ရည်ချူဦးမှပါ ဆိုတဲ့အတွေးဝင်လို့ ထမီကိုကွင်းလုံးပုံချွတ်ချလိုက်ပြီးမင်းမင်း မျက်နှာပေါ်ကုန်းကုန်းကွကွကြီးခွ ဒူးနှစ် လုံးပေါ်လက်နဲ့အားပြုထိန်း စောက်ပတ် နဲ့ပါးစပ်တည့်တည့်ကြီးချိန်ပြီး ဖင်ကြီးဖိကပ်နေအောင်ထိုင်ချပေးလိုက်တယ်။ မင်းမင်းကသူ့ဖင်လုံးထွားထွားအိအိကြီး နှစ်လုံးကိုအောက်ကနေလက်ဖနောင့်နဲ့ ထိန်း လက်ဖဝါးနဲ့အုပ်နယ် လက်မ,တွေ နဲ့စောက်ပတ်ကိုဖြဲ..ပျတ်ကနဲ ပျတ်ကနဲ လျှာကြီးနဲ့စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတစ် လျှောက်ပင့်ပင့်ယက်ပေးတော့မှ ဒူးတွေ ပေါ်ကလက်တွေဖြုတ်ပြီးသူ့ဆံပင်တွေ ဆွဲဆွဲပင့်လို့မျက်ခွက်ကိုစောက်ပတ်နဲ့ထိ ထိမိမိ အားရပါးရကြီးပွတ်ပစ်လိုက်တယ် လေ။မင်းမင်းလျှာကြီးကစောက်ခေါင်းထဲ ထိုးမွှေလိုက်.စောက်စေ့ကိုသွားနဲ့ကျိတ် ကျိတ်ပြီးစုပ်လိုက်..ကြွက်နားရွက်တွေကို တစ်ပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက်နဲ့စောက်ဖုတ်ကြီး တစ်ခုလုံးကိုရစရာမရှိအောင်ထင်တိုင်းကျဲနေတော့ အိဖြူမှာစောက်ရည်ချူတာ မဟုတ်တော့ပဲ.တစ်ဘုံးဘုံးတစ်ဝုန်းဝုန်း ပစ်ပစ်ဆောင့်ပြီးပားစပ်ထဲကို စောက်ရည် တွေတစ်ဖျောဖျောပန်းထွက်သွားရတဲ့အ ထိ ပက်ပက်စက်စက်ကြီးပြီးသွားရတော့ တာပေါ့။ ” အားဟာ့ အားဟာ့ ယက် ယက်.အူး ဟု..စုပ်ကွာ..အင့်အင့် ရော့.အီးဟီး.အာ့ ကောင်းလိုက်တာအမေရေး..ကောင်း.. အောင်မယ်လေးအမေရဲ့..ထွက်ကုန်ပြီ.. ထွက်ကုန်ုပြီ..သေပါပြီအမေရယ်..ဟူး.. ငါလိုးမယောင်္ကျား.” ” ဟ..ဟား..မအော်နဲ့လေ မိန်းမရဲ့.. ကြားကုန်မယ်..မအော်နဲ့..မအော်နဲ့. ပြွတ် ပြွတ် ပွတ် ပလပ်..အူးဟူး ပြွတ်.. ပျတ် ပျတ်.. ” တစ်ချီပြီးသွားပါပြီဆိုမှ ဆက်ဆက်ခါ အစုပ်အယက်ခံနေရတော့အိဖြူအရသာ တွေတစ်စိမ့်စိမ့်တက်နေပြီးမျက်နှာကြီးရှုံ့ မဲ့ အံကြိတ်ခံနေတယ်။မခံမရပ်နိုင်တော့ အောင်ကောင်းလာတော့ ခေါင်းတစ်ရမ်းရမ်းနဲ့ မင်းမင်းခေါင်းကြီးကိုနောက်စေ့က ပင့်ပင့်ဆွဲတင်ပြီးမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကို စောက်ပတ်နဲ့အတင်းဖက်ပွတ်ရော.. ” အော်တယ်ကွာ..အော်တယ်ကွာ.. အင့် အင့် စောက်ပတ်ယက်လေးရဲ့ အင့် ရော့..အူးဟူး..အာ့.ငါလိုးမ ယောင်္ကျား ” စောက်ပတ်နဲ့မျက်နှာကိုပွတ်နေရာက ဖြုံး ဆိုခေါင်းကြီးလွှတ်ချလိုက်ရင်း လက် တွေမွေ့ယာပေါ်ထောက်လို့ ဖင်ဆုံကား ကြီးကအောက်ဖက်ကိုရွှေ့ချသွားတယ်။ တောင်မတ်နေတဲ့လီးနဲ့သူ့ဖင်ကြားကထိ မိပွတ်တိုက်ရွေ့ သွားပြီးလီးဒစ်ဖျားနဲ့သူ့ စောက်ပတ်တည့်နေပြီဆိုမှကားယားကြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျက်လက်တစ်ဖက် ကလီးကိုလှမ်းဆုပ်တာပေါ့။လီးကြီးဆုပ် ပြီးသူ့စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းအတိုင်း လေးငါးကျော့လောက်အစုန်အဆန်ပွတ် တိုက်လျှောထိုးကြည့်နေသေးတယ်။အ ဆင်ပြေပြီဆိုတော့မှလဒစ်ဖျားကိုစောက် ခေါင်းဝ,မှာတေ့ပြီးတစ်ချက်တည်းအရင်း ထိဝင်အောင်ဖိထိုင်လိုးချပစ်လိုက်တယ်။ ဂွေးဥကြီးတွေသူ့ဖင်သားဆိုင်ကြားမှာ ပိ ညှပ်နေအောင်ဖိထိုင်ချပြီး လက်နှစ်ဖက် မင်းမင်းရင်ပတ်ပေါ်မှာထောက်လို့ဆက် တိုက်ကြီးဆောင့်ဆောင့်လိုးတာပေါ့။လီး ကရှည်တော့ လဒစ်ဖျားပေါ်တဲ့အထိဆွဲ မထုတ်နိုင်ပဲ တဝက်ကျော်ကျော်ထိပဲဆွဲ ထုတ်ပြီး တစ်အင်းအင်းတစ်အင့်အင့် နဲ့ အချက်တစ်ရာကျော်အဆက်မပြတ် ပစ် ဆောင့်လိုးတာ။မင်းမင်းကလည်းလီးဒစ် ဖျားကသားအိမ်ကိုထောက်ထောက်ထိ နေတဲ့အရသာဆိမ့်ဆိမ့်ကြီးကိုသိပ်ခံစား ချင်နေတော့ သူ့ဆောင့်ချက်တိုင်းကိုပြန် ပင့်ကော့ပြီးလိုးတာပဲ။ပြန်ပြန်ပင့်လိုးနေ တော့နို့လုံးအိအိကြီးတွေကမျက်နှာပေါ် မှာကြမ်းကြမ်းကြီးခုန်ပေါက်နေကြတာကို မြင်နေရတာ အားမရတာနဲ့လက်ကတစ် လုံးစီဆွဲဆွဲဆုပ်ပြီးအားရပါးရပိတ်နယ်ပစ် တယ်။သူစိတ်ရှိလက်ရှိလိုးနေဆောင့်နေ ရတော့ အိဖြူတအားတက်ကြွနေပြီးလီး တစ်ချောင်းလုံးစောက်ခေါင်းထဲမြုပ်ဝင် နေအောင်ဖင်ကြီးတွေဖိထိုင်ချပြီးမွေ့လိုး ပြန်တယ်။ပတ်ချာလည်ဝိုင်းမွေ့လိုက်.. ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ထိုးမွေ့လိုက်နဲ့နို့လုံး ကြီးတစ်လုံးကိုမင်းမင်းပါးစပ်ထဲကိုင်ထိုး ထဲ့ပြီးစိတ်တိုင်းကျ လိုးတာ။
မင်းမင်းက လည်းနို့ နယ်ရင်း နို့ စို့ရင်းအောက်ကနေ မွေ့ချက်တိုင်းကို စည်းချက်ညီညီ ပင့်ပင့် ပြီးကော့လိုးပေးနေတော့ သားအိမ်နဲ့လီး ဒစ်ကအချိန်ပြည့်ပိပြီးဖိထောက်လိုးပေး နေသလိုပဲ နှစ်ယောက်လုံးအရသာရှိနေ ကြတော့တာပေါ့။အိဖြူက သွေးသားဆူ ဖြိုးသလောက်နှာကသိပ်ကြီးတော့အား စိုက်လိုးရင် လိုးသလောက်ကြီးအထွတ် အထိပ်ရောက်ပြီး ခဏခဏ ပြီးတယ်။သူ ပြီးသလောက်လဲ စောက်ရည်တွေကမင်း မင်းဆီးခုံတွေ ဂွေးဥတွေ ပေါင်ခြံတွေမှာ စိုရွှဲနေပြီး လီးမွှေးတွေဆိုစောက်ရည်နဲ့ ပူးကပ်လို့အချပ်လိုက်ကြီးတွေဂျပ်တည် ကုန်တယ်။နှစ်ယောက်သားစိတ်ရှိလက် ရှိလိုးလိုက်ကြတာ တစ်နာရီလည်းမပြီး. တစ်နာရီခ္ပွဲလို့လည်းမပြီး..ငြိမ့်ငြိမ့်တစ်ချီ. ကြမ်းကြမ်းတစ်လှည့် အရသာခံပြီးလိုးရ တော့အားလုံးကိုမေ့နေတယ်။ ” မေမေရေ..မင်းမင်းကမြင်းကွက်တွေ ကြမ်းတယ်နော်.သူ့မြင်းကိုသာအသေဖိကိုင်..မေမေနိုင်တယ် ” ဖူးအိကအိမ်သာသွားရင်းနဲ့အော်တော့ ” ဖိထားတယ်သမီးရေ့..အင့် မေမေ ကလည်းခပ်ကြမ်းကြမ်းမှကြိုက်တာ.အာ့ အာ့ ” မင်းမင်းအူပွလာတာနဲ့အိဖြူကိုယ်လုံး ကြီးကိုဆွဲဖက်ပြီးလှိမ့်လိုက်တော့သူ့ဟန် ချက်ပျက်ပြီးအောက်မှာပေါင်ကားယားမိုး ပေါ်ထောင်လျက်နဲ့လီးကြီးကသူ့စောက် ဖုတ်ထဲအရင်းထိမြုပ်နေတယ်။ဆောင့် ကြောင့်ထိုင် ခြေဖျားထောက်ပြီး အချက် တစ်ရာ တစ်ရာ့ငါးဆယ်နီးနီး သွက်သွက် ကြီးပစ်ပစ်ဆောင့်လိုးတော့ အိဖြူဖင်ကြီးပင့်ပင့်ကော့ခံပေးနေရင်း ကောက်ကွေး ကော့လန် သွားရသလို တစ်ချိန်လုံးထိန်းထားခဲ့သမျှသူ့လီးရည်တွေကလည်း ဗြန်းကနဲဗြန်းကနဲပန်းပြီးထွက်သွားရော. ” အီးဟီး ဗိုက်တော့ကြီးတော့မှာပါပဲ နော်.လီးရည်တွေဒီလောက်များတာရီး ” ဖဲဆော့နေရင်းဖူးအိကအိမ်သာခဏဆိုပြီးထွက်သွားတာချွေးသီးတွေစို့ပြီးပြန် ရောက်လာတယ်။ဝိုင်းပြန်စ,တော့ဖဲချပ် ဝေရင်းဖူးအိပုံစံကရွစိရွစိဖြစ်နေတာတွေ့ ရတာဦးမြဝင်းသိပ်မသင်္ကာဘူး။သူချည့်ပဲရှုံးနေတော့ မူးနေတာကိုအခွင့်အရေးယူပြီးသူ့သမီးကဖဲတွေများခိုးပြီးဆော့နေ လေသလားလို့ ဦးမြဝင်းမျက်လုံးတွေကလှုပ်ရွလှုပ်ရွလုပ်နေတဲ့သူ့သမီးရဲ့ ပေါင်ခြံ ကြားထဲလှမ်းကြည့်တယ်။
ဘယ်လောက် များမူးနေလဲတော့မသိဘူး..ဂါဝန်ကြီးဖွင့် ပြီးစောက်ပတ်ထဲကစောက်ရည်တွေသုပ် နေတာကိုမမြင်ပဲနဲ့ ဟိုဖက်လက်ကဖဲချပ် တွေကိုပဲမြင်တယ်။ဖူးအိကလည်း ဖဲရိုက် နေရတာစိတ်မပါတော့ဘူး။အိမ်သာခဏ ဆိုပြီးသွားချောင်းကြည့်ရင်းမြင်ခဲ့ရတဲ့ သူ့ အမေကိုယ်တုံးလုံးချွတ်နဲ့မင်းမင်းရဲ့ကိုယ် ပေါ်တက်လိုးနေတဲ့ပုံတွေ..အမေ့ကိုပက် လက်လန်သွားအောင်ဖက်လှိမ့်ပစ်ပြီး သူ့ အမေပေါင်ကြားထဲဆောင့်ကြော့ထိုင်ခြေ ဖျားထောက်လို့ဇယ်စက်သလိုပစ်ပစ်လိုး နေတဲ့မင်းမင်းရဲ့လိုးချက်တွေ..သူ့အမေ စောက်ပတ်ထဲကို မင်းမင်းလီးကြီးဝင်နေ ထွက်နေပုံတွေချည့်ပဲ မျက်စေ့ထဲမှာတစ် လှည့်စီ မြင်ယောင်မိနေတော့ ဖဲချပ်တွေက လန်တဲ့ဟာကလန်..မှောက်တဲ့ဟာကမှောက်..။အချိန်တွေကြာလာတော့ အမေအလိုးခံနေတာကြီးထပ်မြင်ချင်တဲ့ စိတ်ကို ဖူးအိဘယ်လိုမှမအောင့်ထားနိုင် တော့ဘူး. ” အာ..ဗိုက်ကလဲ နာလာပြန်ပါပြီကွာ ဘာအစားမှားတယ်မသိဘူး..အချဉ်ထုပ် တွေများလား ” ဖဲချပ်တွေချပြီးနောက်တစ်ခေါက်ထပ် သွားချောင်းတော့တံခါးကစောစောတုန်း ကလို ဟ,နေတုန်းပဲ။ဒီတစ်ခါတော့လိုးလို့ပြီးသွားကြပြီထင်တာပဲ..မင်းမင်းရဲ့လီး ကြီးကိုအမေကအားရပားရစုပ်ပြီးသန့်ရှင်း ရေးလုပ်ပေးနေတာ ပြွတ်ကနဲ.ပလွတ်က နဲ ပလုပ်ကနဲ အသံတွေထွက်နေတယ်။ သေသေချာချာကြည့်တော့မှ မင်းမင်း ရဲ့ လီးက တကယ်အကြီးကြီးပဲ..ပြည့်စုံလီး ထက်နှစ်ဆလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာလဲ အမှန်ပဲ..ကြီးလောက်တယ်။သူ့လိုမိန်းမတစ်ယောက်အတွက်တော့တော်တော် မက်မောစရာကောင်းတဲ့လီးကြီးလို့ဆိုရ မှာပါပဲ။သူ့လီးကြီးကိုမက်မက်မောမောနဲ့ ငေးကြည့်ပြီးစိတ်ကူးနဲ့အလိုးခံကြည့်နေဆဲမှာ ဧည့်ခန်းဖက်ကလူရိပ်မြင်လို့ကြည့်လိုက်တော့ပြည့်စုံတစ်ယောက်ဖဲဝိုင်းက ထ,လာတာတွေ့ရတယ်။မင်းမင်းလီးကြီး အမေစုပ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြည့်စုံမ မြင်စေချင်တော့အမေတို့ကြားရအောင် လို့လေသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ” ဘာလဲဟဲ့..ငါအနိုင်ပိုင်းတယ်ထင်နေ လို့လား..လာပါပြီဟာ.ဗိုက်ကတစ်ကယ် နာနေလို့ပါ..လာပြီ ” အခန်းတံခါးကို ကလစ်ခနဲ အသံမြည် အောင်ဆွဲပိတ်လိုက်ပြီးဧည့်ခန်းဖက်ပြန် လာတော့ ” ပွဲသိမ်းပြီဟ..အဖေက မှောက်သွား ပြီ..အမေတို့ချက်စ်ပွဲပြီးရင်လဲ ထမင်းစားရအောင်ကွာ..ဗိုက်ဆာတယ် ” ဒီတော့မှပဲ အိဖြူကအခန်းထဲမှာ လီး စုပ်နေရင်းပြန်အော်တယ်.. ” ပြီးတော့မယ်သားရေ..ပြီးတော့မယ် ထမင်းစားခန်းမှာစောင့်..ဒေါ်သက်မာတို့ကိုထမင်းပွဲပြင်ခိုင်းထားလိုက်..ပြီးပြီ..ပြီး ပြီ..အု အု အု ဂွတ် အားဟား ပြီးပြီ ” ထမင်းစားတော့အမေကမင်းမင်းကိုပြု စုပေးနေလိုက်တာများ ကြည့်ရင်းနဲ့မျက် စေ့တောင်နောက်လာတယ်။
သူ့လီးကအဲ လောက်များစွမ်းနေလို့လား.အမေက နှာ ကြီးလွန်းနေတာလားလို့ဝေခွဲကိုမရဘူး။ အမေ့လို ပယ်ပယ်နယ်နယ် အားရပါးရ ကြီးမဟုတ်ပေမယ့်တန်ရာတန်ရာတော့ ကိုယ်လည်းသုံးလေးယောက်လောက်နဲ့ တော့ အလိုးခံခဲ့ရဖူးတာပါပဲ။ပြည့်စုံနဲ့လိုး မိခဲ့ကြတုန်းကလည်း.မောင်နှစ်မချင်းလိုး လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အသိထက်ပိုပြီး ဘာမှ သိပ်မထူးခြားလှပါဘူး။သူတို့မို့လွန်လွန်း တယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မျက်စောင်းကြီးတစ် ချက်ထိုးပြီးထမင်းပွဲကထ,ခဲ့တယ်။ ထမင်းစားပြီးကြတော့ အဖေနဲ့အမေ တို့ကလည်းအခန်းထဲဝင်နှပ်နေပြီ..ပြည့်စုံကလည်းဘီယာများနေတော့အိပ်.ဖူးအိတစ်ယောက်ထဲနှာကန်နေရတာအားမရ ဘူး။မင်းမင်းအခန်းကိုသွားချောင်းကြည့် တော့ကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှန်.ခြေတစ် ဖက်ဆန့်တစ်ဖက်ခွင်လျက်မျက်နှာကျက် ကိုပြူးကြည့်နေတယ်။ပေါင်ခွင်ထဲလှမ်း ကြည့်တော့ လီးတောင်နေတဲ့ပုံမပေါ်ပဲ ဖု တုတုဖောင်းအိအိပဲဝပ်နေတာတွေ့လို့ဝင် ချသွားပစ်တာပော့။မပြောမဆို သူ့ကုတင် ဘေးစွန်မှာဝင်ထိုင်တော့ သူကလူပါးပဲ.. ကိုယ်ကဒီဖက်စောင်းလာပြီး မထိတစ်ထိ နဲ့လက်တစ်ဖက်ကဖင်ကြီးတွေကိုလာထိတယ်လေ။သူဖူးအိကို စိတ်စမ်းနေပြီ လို့ သိလိုက်တာမို့ ဖင်ကြီးတစ်ဖက်ကို သိသိသာသာချွပေးလိုက်ရင်း အကြံရလာတာနဲ့မွေ့ယာပေါ်ကိုလက်တစ်ဖက်ထောက်..့ ကျန်တဲ့လက်နဲ့သူ့နဖူးကိုရဲရဲတင်းတင်းပဲစမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ” မဖျားလောက်ပါဘူးနော်..ဟင်းဟင်း ပန်းဖျား များဖျားနေသလားလို့ ” မင်းမင်းကသူ့မျက်နှာပေါ်မိုးနေတဲ့စွပ် ကျယ်လက်ပြတ်ယူရှိပ်အိအိထဲကနိုလုံးစူ စူနင့်နင့်ကြီးနှစ်လုံးကိုမျက်တောင်မခတ် ပြူးကြည့်နေပြီးလည်ချောင်းခြောက်သွားလို့ထင်ပါရဲ့တံတွေးတွေဂလုကနဲမျိုချသံကိုကြားရတယ်။မအေကိုလိုးပြီးပြန်တော့ သမီးကိုဆက်လိုးရဦးမှာမို့စိတ်တွေလှုပ် ရှားနေတာလား..ဖူးအိနို့ လုံးကြီးတွေကဖမ်းစားလွန်းတာမခံနိုင်လို့လားတော့မသိဘူး။ ” ဖျားပါဘူးဟာ.ဘာပမ်းစရာရှိလို့လဲ. တောင်ပေါ်တက်နေရတာလဲမဟုတ် ” သူ့အပြောကရယ်စရာမို့ နှာခေါင်းကြီး ဆွဲလိမ်ပစ်ပြီး ရိုးရိုးသားသားလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ရင်ပတ်ပေါ်လက်တင်ထားလိုက် ရင်းလက်သည်းလေးတွေနဲ့ဆော့ပေးပစ် လိုက်တာပေါ့. ” ခိခိ..ပြောပုံကြီးကလဲ..တောင်တက် မှပဲ ပင်ပမ်းရတော့မှာလိုလို..ခိခိ..အေးပါ လေ..မတောင်ပဲနဲ့တက်လို့မှမရပဲနော.ခိခိ..မတောင်ပဲတက်ရင် ဟီးဟီး ပျော့ခွေ ခွေကြီးနေမှာပဲနော်ခိခိ.ဝင်တောင်ဝင်မှာ မဟုတ်ဘူး..” မင်းမင်းက ဒီလောက်မတုံးဘူးလေ.. ဖင်အောက်ထဲ လျှိုသွင်းထားတဲ့လက်က ချက်ချင်းကြီးပဲ စောက်ဖုတ်ကိုအစောင်း လိုက်မျှောထဲ့လိုက်သလို ကျန်တဲ့လက် တစ်ဖက်ကလည်းနို့ လုံးကြီးတစ်လုံးကိုလာဆုပ်ဆွဲပြီးသူ့ပါးစပ်ထဲအမြုံလိုက် အုံ လိုက် အတင်းထိုးသွင်းတာ။
” အာကွာ..ခိခိ..ဘာရီးလဲဟ..ယား တယ်ကွာ..ခိခိ..နေဦး ဖယ်ဦး..တံခါးကြီး ပွင့်နေတာကွ..နေပါဦးဆို..အဝတ်တွေပါ ချွတ်ပေးပါ့မယ်ကွာ..ခိခိ..ဖယ်ဦးနော်.. ပြည့်စုံတို့မြင်သွားမှာစိုးလို့ ” မဖယ်ချင့်ဖယ်ချင်..မလွှတ်ချင်လွှတ် ချင်နဲ့ဖယ်ပေးပြီး. ” သူ့ကိုလိုးနေတဲ့လင်လေးမြင်သွား မှာတော့ စိုးရိမ်တယ်ပေါ့ ဟလား..နေဦး သူ့ရှေ့ မှာကို လိုးပြပစ်ဦးမယ်.ဟင်း ” ဖူးအိကရယ်နေရင်း လျှာလေးထုတ် ပြီး ” ခ်ခ်..အဲလိုရီးတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ ဆရာရယ်.ခိခိ..နှစ်ယောက်လုံးများတက် လိုးနေကြရင် ကျွန်မကအသေစိတ်ဆိုးမိ မှာမို့လို့ပါ..ခိခိ ခ်ခ် ” ဖူးအိက ရည်းစားသုံးလေးယောက် လောက်နဲ့တော့အလိုးခံဖူးတာအမှန်ပဲ။ဒီ ကြားထဲပြည့်စုံနဲ့ပါအလိုးခံခဲ့တာတစ်လနီးပါးလောက်တော့ရှိပြီ။တကယ်တန်းလိုးရတာတော့လူလစ်တဲ့နေရာရှာရတာနဲ့..ရတဲ့အချိန်လေးနှူးနေရ နှပ်နေရတာနဲ့ပဲ အနှစ်ပါပါလိုးလိုက်ကြရတဲ့အချိန်ဆိုတာနည်းနည်းလေးရယ်။လီးရည်ထွက် သွားပြီဆိုတာနဲ့ပဲ..ကိစ္စပြီးပြီဆိုပြီးပြန်လာ ခဲ့ရတာချည့်ပဲအမြဲကြုံခဲ့ရတော့အတွေ့အ ကြုံရှိတယ်လို့ပြောရမှာထက် အတွေ့အ ကြုံမရင့်ဘူးလို့ပြောရင်ပိုမှန်မယ်ထင်တာပဲ။ပြည့်စုံကလည်းအခွင့်အရေးအတွေအ ပြည့်အစုံရပြီးတစ်အိမ်ထဲအတူတူနေရပါလျက်နဲ့လိုးအထာမကျွမ်းသေးတာလား. အိမ်သားတွေနဲ့မိမှာကြောက်နေတာလား ထိန်းရမှန်းမသိတာလား.ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး.ထမီလှန်ပြီဆိုတာနဲ့ ပုဆိုးပင့်ပြီးအားသန်သန်ကြီးဆက်တိုက်ဆက်တိုက် ပစ်ဆောင့်လိုးတော့.ဆယ်မိနစ်တောင်မခံဘူး.လီးရည်ကပန်းထွက်သွားရော။လီးရည်တွေတော့များပါရဲ့.သူ့အစ်မဗိုက်ကြီးမှာစိုးလို့ဆိုပြီးစောက်ပတ်ထဲမပြီးပဲအပြင် ကိုချည့်ပန်းထုတ်ပစ်တော့ ဘယ်လိုမှကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည် အားမရမကျေနပ်ခဲ့ဘူး။အဲ..သူလိုးလို့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဟိုကြည့်သလိုဒီကြည့်သလို အတိတ်မေ့သလိုလို ရွှေထုပ်ပျောက်သလိုနဲ့ မယောင်မလည် ပြန်ထွက်သွားခဲ့တာချည့်ပဲ။အကြာကြီးအလိုးခံရဖို့နေနေသာသာ.နှစ်ချီဆက်ပြီးအလိုးခံရတယ်ဆိုတဲ့အရသာတောင်မခံစားဖူးဘူး။အပြောအဆို.အဖော်အပြ အနမ်းအစုပ်.အယုအယတွေတော့ဖြင့် ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ ဆရာကြီးအထာကျွမ်းနေပါပြီ။ ” ချွတ်သေးဘူးလားကွာ.ကြာတယ် ” တံခါးပိတ်ပြီးပြန်လာတော့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုလုပ်နေတာနဲ့ ထမီကြီးဆွဲချွတ်ပစ် တော့စောက်ဖုတ်ကြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကာ ပြီးတစ်ခိခိရယ်တယ်။စောက်ဖုတ်ကသူ့မျက်နှာရှေ့ မှာစောက်မွှေးစင်းစင်းလေးနဲ့တရစ်ဝဲဝဲ ဝေ့လည်ဝေ့လည် ဖုံးလိုက်ပွင့် လိုက် လုပ်ပြနေတော့လီးကတစ်ဖျောင်း ဖျောင်းတောင်နေတာထက် ယက်ပစ်ချင် စိတ်ကပိုဆိုးလာတာမို့လျှာကြီးထုပ်ပြပြီး ခေါ်တာပေါ့။
ဖူးအိက အလိုး အနှိုက်သာခံဖူးတာစောက်ပတ်ယက်မခံဖူးတော့ရှေ့ ကကာထားတဲ့လက်တွေဖွင့်ပြီး ကုတင် ပေါ်စောင်းအိပ်နေတဲ့မင်းမင်းပါးစပ်ရှေ့ ကိုခပ်ကွကွရပ်ပေးလိုက်တယ်။ခပ်ကွကွ ဖြစ်နေအောင်ပေါင်ကြီးတွေချဲပြီး ခွဲထား ပေးပေမယ့် စောက်ပတ်ကစေ့စေ့ပူးပြီး နခမ်းထူထူကြီးတွေပူးကပ်နေတုန်းပဲ ဆို တော့အတော်လတ်သေးတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။ဖင်ဆုံကြီးနှစ်လုံးကိုလက်နဲ့ဆွဲယူ ပြီးမျက်နှာနဲ့စောက်ပတ်ဖိဖိနမ်းပေးလိုက် တော့ ဖူးအိတင်းမခံနိုင်တော့ပဲခေါင်းကြီး ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အတင်းဆွဲကပ်ပေးပစ် မိတယ်။သင်းပျံ့စူးရှတဲ့အနံ့သင်းသင်းကို အားရပါးရတစ်ဝကြီးရှိုက်သွင်းလိုက်ပြီးလျှာကို စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းထဲထိုး သွင်းလိုက်တော့ ဖူးအိဘယ်အားရတော့ မှာလဲ..မချင့်မရဲနဲ့ကုတင်ပေါ်ပောင်ကြီးခွ ကျော်တက်လာတော့တာပေါ့။မင်းမင်းကပါးစပ်နဲ့စောက်ပတ်ကိုအလွတ်မပေး တမ်းစုပ်ဆွဲထားတာမို့ မျက်နှာပေါ်ပုဆစ် တုပ်ထိုင်ပြီးခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲမ, ပင့်ပေးထားမိတယ်။စောက်ခေါင်းထဲထိ လျှာကြီးထိုးထဲ့ပြီးမွှေနှောက်ယက်ပေးနေ ရင်းလက်မ,နဲ့စောက်စေ့ကိုဖိဖိကျိတ်ချေ နေတော့ မရဖူးတဲ့အရသာတွေရတာမို့ အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ပြီးခါးလေးနွဲ့ခာနွဲ့ခာနဲ့အတင်းဖိဖိပွတ်ပစ်မိတာ တစ်ခါမှမကြုံ စဖူး စောက်ရည်တွေတစ်ဖျန်းဖျန်းပန်းပြီး ထွက်သွားတော့တာပေါ့။ မင်းမင်းမျက်ခွက်ကြီးပေါ်စောက်ဖုတ် ကြီးအပ်ပြီးမှောက်နေတော့ အောက်က ခံတဲ့လူကအငြိမ်မနေပြန်ဘူး။သူ့စောက် ရည်တွေရွှဲနေတဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ ဖင် ဝ,ကိုရစ်ရစ်ဝိုက်နေတော့ စောက်ပတ်ထဲ ကရွနေသလို ဖင်ကလဲရွလာပြန်ရော။ ” ဟာ့ အာ့..ဟိတ်..ယွတယ်ကွာ.လိုး. လိုး..လိုးပေးဦးကွာ..ဖင်လိုးလိုး စောက် ပတ်လိုလိုး..အားရပါးရကြီးပစ်လိုးပေးဦး..တောင်းပန်ပါရဲ့..လိုး လိုး..အင့် ” မွေ့ယာပေါ်အတင်းလှိမ့်ချပြီး ပေါင်ကြီး တွေကားယားဖြဲလို့ ဒူးတွေဆွဲမြှင့်ထောင် ပေးထားတယ်။တစ်ကယ့်ကို ဖင်ပေါက် ရော စောက်ခေါင်းရောပွင့်နေတာမို့ လိုး ချင်တဲ့အပေါက်လိုးပဲ။သူ့လီးကြီးနဲ့သာ ဖင်ထဲအစိမ်းလိုးပစ်ရင်စအိုဝ,ကြွက်သား တွေစုပ်ပြတ်ကုန်မှာသေချာနေတော့ အဲ လောက်ကြီးလဲ ပက်ပက်စက်စက်မလိုးခွဲ ရက်ပြန်ဘူး။ဖင်ဝ,ကိုတံတွေးတွေရွှဲနစ် နေအောင်ဆွတ်ပြီးလက်မ,.ကိုအသာထိုးသွင်းတော့လည်းသိပ်ကျပ်စေးလွန်းနေ ပြန်တော့ ဖင်လိုးဖို့စိတ်လျှော့ရတာပေါ့။ ” စိတ်တင်းမထားနဲ့လေကွာ..လျှော့ချထားပြီး တစ်ကိုယ်လုံးဖျော့ချထားပေါ့ ဖင်လဲခံချင်သေးတယ် ခံလဲမခံတတ်ဘူး ဒီပုံနဲ့ဆို နင်ချီးတောင်ပါလို့ရမှာမဟုတ် ဘူး..ဖျော့ထား ” ဖူးအိကတစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်ခါ တွန့်တွန့်လူးနေပြီ။
ဖင်ပေါက်ကိုတံတွေး ဆွတ်ခံရလေလေ ပိုလူးလေလေပဲ.. ” ဟင့် အင့်..ကြာတယ်ကွာ..ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲလို့..ဟင့်..စောက်ပတ်ကြီး လိုးခွဲပစ်ပါလားလို့..ဟင့် ဟင့် အင့် လိုး တစ်ခါတည်းအသေလိုး အို့ ” စကားမဆုံးခင်ကတည်းကပေါင်ကြီး တွေကို သူ့ရင်ပတ်နဲ့ပိကပ်နေအောင်ဆွဲ မြှင့်ပေးထားပြီးပြီ။ ခြေကျင်းဝတ်တွေကိုလည်းသူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲထားပေးပြီးပြီဆိုတော့စောက်ဖုတ်ကြီးကပက်ပက်စက် စက်ကြီးပွင့်နေတယ်။မင်းမင်းကဖင်ကိုခွလို့ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီးသူ့လီးအဖျား ကော့ကော့ကြီးကိုပွင့်နေတဲ့စောက်ခေါင်း ထဲထိုးသွင်းလိုက်တာ..တစ်ခံနေပြန်လို့ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲအားပြုပြီးဖိထိုးထဲ့ လိုက်တော့မှ လဒစ်ကြီးထိုးဝင်သွားတာ။ စေးပိုင် ကျပ်ထုပ် ပူနွေး စိုအိတဲ့အရသာ ကိုမျှဉ်းပြီးခံစားနေရသလို ဖူးအိမှာလည်း မာတင်း တုတ်ခိုင်နွေးအိနေတဲ့လီးကြီးရဲ့ အထိအထိုးကိုတစစ်စစ်နဲ့တိုးပြီးခံစားနေ ရတယ်။လီးကြီးကတုတ်ခဲ မာတောင် ပူ နွေးနေလွန်းလို့ စောက်ခေါက်းထဲပြည့် သိပ်နေတဲ့အပြင်စောက်ဖုတ်ကြီးပါဖေါင်း ကားတက်လာသလားလို့ထင်ပြီး ခေါင်း လေးထောင်ပြီးငုံ့ကြည့်မိသေးတယ်။ ” လိုး.လိုး.လိုးပါယောင်္ကျားရယ်..အ ရင်းထိဝင်အောင်လိုးပြီး အားရပါးရကြီး ဆောင့်ပေးစမ်းပါ. ” နှာသိပ်ကြီးတော့ နာမှာအောင့်မှာကို မကြောက်ဘူး။အတင်းလိုးခိုင်းနေတာနဲ့ တစ်ချက်နှစ်ချက်ဆွဆွပေးတယ်ဆိုရုံဆွ ပြီးလီးအရင်းထိတစ်ချက်ထဲပစ်လိုးထဲ့ လိုက်တော့သားအိမ်ထိတိုးဝင်ဆောင့်ပစ် တာ.အသံကုန်အော်ရတော့တာပေါ့။ ” အားယားယား.အမေရေ..သေပါပြီ အို့ ဟို့.အိုး.အိုး.ဝိုး ” မင်းမင်းကသူ့ပါးစပ်ကိုလှမ်းပိတ်ပြီး ကပ်ဖိညှောင့်လိုးလို့ တော်တော်ကြီးကြာသွားတော့မှ ဖင်ကြီးဆော့ပေးနိုင်တာ။ ” ဖင်ခံဦးမလား ” ” ဟွန့် ” သားအိမ်ကိုအထိမခံခဲ့ဖူးသေးလို့သာ လီးတန်လီးကြောရှည်ကြီးကတိုးဝင်လာ ပြီး.လီးဒစ်ဖူးနွေးတင်းတင်းကြီးကတစ်အိ အိနဲ့သားအိမ်ခောင်းဝ,ကိုထိုးဖိခံရစ,တုန်းက မျက်လုံးပြူးမျက်ဆန်ပြူး အလူးအလဲ ခံလိုက်ရပေမယ့် အချက်နှစ်ဆယ်အစိတ် လောက် လီးနဲ့စောက်ဖုတ်မခွာမချွတ်ပဲဖိ ကပ်သွင်းထားပြီးကပ်ညှောင့်လိုးပေးတာခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အရသာကိုသိသွားတာမှ ကောင်းကောင်းကြီးသိသွား တာ။ရင်စို့ကိုကျော်လွန်လို့လည်ချောင်းဝ အထိများတောင်မှသူ့လီးကြီးတိုးဝင်လာ လေသလားလို့ထင်ရတဲ့အထိရှည်လျားတဲ့လီးရှည်ကြီးရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်း အခုလို သားအိမ်ထောက်တဲ့အထိဆောင့်သွင်းခံရမှသိရတော်တာအမှန်ပါပဲ။
ဒီအရသာမျိုးက ပြောတော့သာလွယ် မယ်ထင်ရပေမယ့် တော်ရုံတန် ရုံနဲ့သိနိုင် ရနိုင်တဲ့အရသာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မိန်းမ သားအိမ်ကိုဆောင့်ချက်တိုင်းထိုးဖိနိုင်တဲ့ လီးမျိုးဆိုတာ ဗမာလီးထဲမှာခပ်ရှားရှားပါ ပဲ။လေးငါးခြောက်လက်မလောက်ပဲရှည် တဲ့လီးမျိုးနဲ့ရိုးရိုးလေးလိုးနေလို့တော့ဖြင့် ဘယ်လောက်ကြီးပဲတုတ်ခိုင်ဖြီးနေပါစေ. ဖူးအိလိုအကိတ်ကတစ်စက်လေးမှဂရုမ စိုက်တာအမှန်ပါ။ယောင်္ကျားတွေရဲ့ လီး ကြီးတယ်တုတ်တယ်ဆိုတာ မိန်းမတွေ အတွက်တော့အားရပါးရအယားပြေစေဖို့ သက်သက်လောက်ပါပဲ။ကြီးလွန်းလို့ခံရ ရင်လည်း မသကာလို့ခံရလှ စောက်ပတ် အခြေပြဲရုံနဲ့ နခမ်းသားကြီးထူပြိန်းရောင် ကိုင်းလာရုံထက်တော့မပိုနိုင်ပာဘူး။ဒီလို ခံရအောင်လိုးနိုင်တဲ့လီးဆိုတာကလဲဗမာလီးထဲမှာခပ်ရှားရှားပါ။ကလေးတောင်မှ မွေးထုတ်ပေးနိုင်သေးတာပဲ.လီးကြီးတာ တုတ်တာလောက်ကတော့..ပျင်းစရာပဲ။ ခံရလှ ကျပ်ထုပ်ထိုးရတာထက်မပိုဘူး။ နောက်ပိုင်းဆို စောက်ပတ်ထဲဆင်အုပ် မောင်းသွင်းရင်တောင်ပြန်မထွက်အောင် ညှပ်ထားပေးလို့ရတယ်လို့ပြောတာအပိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ..လီးရှည်တာကြီးကျတော့ တစ်မျိုး ဖြစ်သွားပြီ။အထိမခံရစဖူးခံလိုက်ရစဉ်က မျက်ရည်ကျလောက်အောင်အောင့်ခံတါ တောင်မခံနိုင်လို့ တွန်းလိုက် ရုန်းလိုက် ထုလိုက် ရိုက်လိုက် အော်ဟစ်လိုက်နဲ့ နည်းမျိုးစုံအသုံးချပြီးလဒစ်နဲ့သားအိမ်အ ဖိခံရတာလွတ်အောင်ရှောင်ပြေးနေခဲ့ပေ မယ့် ပြေးမလွတ်လို့ညှောင့်ပဲ့ ညှောင့်ပဲ့ နဲ့ ဖိဖိလိုးခံလိုက်ရပြီဆိုတာနဲ့ အချက်လေး ငါးဆယ်မပြည့်ခင်ဒီအရသာကိုတစ်သက် စာစွဲသွားမိတော့တာပဲ။ကောင်းလိုက်တဲ့ အရသာ. ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးသွင်းလိုက် ဆွဲထုတ်လိုက် လိုးပေးနေတာာဆိုတော့ ဆောင့်ချက်တိုင်းဟာ စောက်ခောင်းဝ,က နေ ရင်ညွန့်အထိတစ်မြေ့မြေ့ နဲ့နင့်နင့် သည်းသည်းကြီးအရသာရှိတာ။သူ့ဆီးခုံနဲ့ကိုယ့်ညှပ်ရိုးထိကပ်မိတဲ့အချိန်မှာဖိဖိပြီး လီးကြီးကိုအတွင်းကကြွက်သားးတွပါစန့် ထွက်လာအောင်ကပ်လိုးထဲ့တော့ လည် ချောင်းဝ,အထိဆို့နင့်တက်လာသလားလို့ထင်ရအောင်ကောင်းတာ။တစ်ချက်မှ တစ်စက္ကန့်မှ အာရုံကလွတ်ထွက်မသွားပဲ စူးနစ်နေအောင်အရသာရှိတာ။ ” အားဟားဟား..ကောင်းလိုက်တာ ကျွတ်ကျွတ်..ကောင်းလိုက်တာနော်.အာ့ ဟာ့ဟာ့..ထည့် ထည့် ရတယ် ရတယ် ခံ နိုင်တယ်..ထည့်..အူးဟူး. ကောင်းလိုက် တာမောင်ရယ်..” သာမန်လိုးနေရုံနဲ့ဘယ်လောက်ကြီး ဆောင့်ဆောင့်စန့်မထွက်လာတဲ့လီးတန် ကြောထဲကကြွက်သားတွေက ဒီလိုကပ် လိုးတော့အရှည်ကြီးစန့်လာလို့အားရပါး ရ ရှိလိုက်တာလေ..ဘယ်တုံးကမှမပြီးခဲ့ ဖူးသမျှ ဖျန်းဖျန်း ဖျန်းဖျန်းနဲ့စောက်ရည် တွေပန်းထွက်ကုန်တယ်။အာရုံကြောကို ကျော်လွန်လို့ရင်ထဲအထိတစ်လှပ်လှပ်နဲ့ လှိုက်ဖိုအောင်အရသာရှိနေတာနဲ့ဖူးအိကတော့သူ့လက်မောင်းတွေထဲကိုလက် သည်းတွေစူးနစ်ဝင်သွားတဲ့အထိဆုပ်ဆွဲခါရမ်းပြီးအတင်းအော်ပစ်မိတော့တာပဲ။
” လိုး..မောင်..အသေသာလိုးတော့.. တအားကောင်းတာရီး..လိုး လိုး ” အဲဒီတော့မှ မင်းမင်းကခြေကျင်းဝတ် တွေကိုသူ့လက်နဲ့လာဖိပြီးမှောက်လျက် ကြီးလိုးတာ။ဒီတစ်ခါတော့ မှောက်လျက် နဲ့ခြေဖျားထောက်လိုးတာဆိုတော့ စော စောကလို မျှဉ်းပြီးသွင်းတာမဟုတ်တော့ ဘူး။ပုံမှန်တစ်လှည့် သွက်သွက်တစ်ခါ.. နား နားပြီးပစ်ဆောင့်လိုးတာဆိုတော့အ ရသာကမုန်တိုင်းကျသလိုကြမ်းကြမ်းကြီး ရက်ရက်စက်စက်ကောင်းပြန်တယ်။ဖူးအိ ကလည်းသွေးသားတက်ပြီးဖွံ့ထွားတဲ့ မိန်းမ..အပျို ဆိုတော့ သူကြမ်းသလိုပြန် ကြမ်းပစ်တာပေါ့။သူကဆောင့်လိုးလေ ဖူးအိကဖင်ကြီးပစ်ကော့ပင့်ပြီးပြန်လိုးပစ် လေပဲ..အရှုံးကိုမပေးပဲပြန်လိုးတာဖူးအိ ချည့်ပဲ ခဏခဏပြီးနေတော့တာပါပဲ။ ” ကောင်းလား ဖူးအိ ” ” တအားကောင်းတယ်မောင်..မောင့် လိုးချက်တွေက တအားသန်တာပဲ..လီး ကြီးကလည်းမာတင်းနေတာတစ်ချက်မှ မကျဘူးနော် ” ” ကြိုက်လား ” ” ကြိုက်တယ်..မောင်ရော..ဖူးအိကို ကြိုက်လား..” ” ကြိုက်တာပေါ့.ကိုယ်ကအပျိုစောက် ပတ်မှမလိုးဖူးတာ..ဖူးအိစောက်ပတ်က အပျိုလား ” ” ခိခိ..သူသိရဲ့သားနဲ့နော်..ဖြေဘူး.. သတ်ပြိုက်..ခိခိ ” ” ဖြေပါကွာ..ချစ်လို့ပါ..ဟင်းဟင်း.. လီးဘယ်နှစ်ချောင်းအလိုးခံဖူးလဲ ” ” အိုး..လိုးမယ့်ဟာ လိုးတာမဟုတ်ပဲနဲ့..ခိခိ..ဖြေပါဝူးဆို..ဟီးဟီး ” ” ပြည့်စုံလီးနဲ့ကိုယ့်လီး..ဘယ်လီးပို ကြိုက်လဲ ပြော ” ” ဟွန့်..ပြည့်စုံက မောင်နှစ်မချင်းမို့ တစ်မျိုးခံစားရတာပါ..ရှင်ကတော့ ခ်ခ်.. ကျွန်မကိုလိုးတဲ့သူတွေအားလုံးထဲမှာ.. လီးအသေးဆုံး.လိုးအားအညံ့ဆုံး…အ လိုးမတတ်ဆုံး..အားမရဆုံး ပါပဲရှင် ” စကားတောင်မဆုံးသေးဘူး..ပါးတစ် ချက်အရိုက်ခံလိုက်ရပြီး တစ်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ အဆက်မပြတ်ဆောင့်လိုးခံလိုက်ရတာ ဖူးအိမျက်လုံးတွေပြာထွက်သွားတယ်။ ဒီတစ်ခါ ဖင်ဆုံကြီးကိုဆောင်ကြောင့်ခွ ထိုင်ပြီးအပေါ်စီးကကော်ကော်လိုးတာ မို့ စောက်ခေါင်းကြီးဟောင်းလောင်းဟ, ပြီးပွင့်ထွက်နေတာ ပိတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူး။ ခြေကျင်းဝတ်တွေကုန်းဖိထားပြီးခွလိုး နေတာဆိုတော့ နင့်ကနဲနင့်ကနဲ ကြမ်း ကြမ်းကြီးပစ်ဆောင့်ခံရတာ လီးနဲ့စောက် ပတ်တစ်ထွာလောက်အကွာကပစ်ပစ်ပြီး အလိုးခံရတယ်။စောက်ခေါင်းကြီးပွင်ဟ,နေ ချက်ကလည်း ပါးစပ်ကြီးဟ,ထားတဲ့အ တိုင်းပဲ..လီးနဲ့ကွက်တိ။ဖူးအိအော်သံကို အရက်သမားတွေမကြားကြပေမယ့် သူ့ အမေကကြားလို့လာကြည့်တော့ပါးစပ် ဟောင်းလောင်းကြီးပွင့်နေတာက ဖူးအိရဲ့စောက်ခေါင်းနဲ့တစ်ပုံစံထဲပဲ။ ” အဲတော်..မအေ့နဲ့လိုးနေတဲ့လင်နဲ့မှ သမီးကအလိုးခံနေတာ..ဒီလောက်ကြီး စောက်ပတ်ယွရင်လဲ ငါ့စောက်ပတ်ကြီးပါယက်ပေး..အင့် ” ထမီအောက်နားစ,ကြီးပင့်ပြီးဖူးအိရဲ့ မျက်နှာပေါ်တက်ထိုင်ပစ်တယ်။ဖူးအိရဲ့ ခြေကျင်းဝတ်တွေကိုသူ့လက်နဲ့ဖိထား ပေးတော့ မင်းမင်းကနောက်ကနေသူ့နို့ ကြီးတွေစုံဆုပ်ဆွဲပြီးပစ်ဆောင့်လိုးရော။ ဘီယာသောက်တာများသွားတော့ အိပ်ယာနိုးခာစ,ခေါင်းထဲကအုံခဲပြီးသေး ကပေါက်ချင်နေတယ်။ဒါနဲ့ အိမ်သာထဲ သေးသွားပေါက်ပြီးပြန်အထွက်မှာမဖူးကို ထမီစွန်တောင်ဆွဲနဲ့တွေ့ရတော့သိပ်မယုံ ချင်ဘူး။ကိုယ့်အစ်မနှာအလွန်ထန်တယ် ဆိုတာကိုယ်ကခဏခဏလိုးဖူးတော့သိ နေတာပေါ့။ထမီမှာလည်းလီးရည်လိုလို စောက်ရည်လိုလို အကွက်အကွက် တွေ မြင်ရပြီး ဟိုကောင်ကလည်းရောက်နေ တာဆိုတော့မသင်္ကာတဲ့စိတ်ကပိုပြီးကြီး လာတယ်။ ” အိမ်သာတက်မလို့လား မဖူး ” ” အင်းလေ..သေးပေါက်ချင်လို့..ဖယ် ပါဟဲ့ မြန်မြန်..ထွက်ကျတော့မယ် ” မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးအဖြတ်မှာထမီဆွဲ ချွတ်ချပစ်တာ ကွင်းလုံးကျွတ်ပဲ။စောက် ပတ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ ပျစ်ချွဲချွဲနဲ့အ ရည်တွေတန်းလန်းထွက်နေတယ်။ ” အဲ..နင်..နင်.ဒါစောက်ရည်မှမဟုတ် ပဲ..လီးရည်တွေ.လီးရည်တွေ..နဲဘူးရီး.. အိုင်ထွက်နေတာပဲ..နင် နင်.ဟိုကောင်နဲ့ လိုးလာတာမလား..ငါ အမေနဲ့တိုင်ပြော မှာ..နင်အလိုးခံလာတာ ” ဖူးအိကတော့ စပ်ဖြီးဖြီးပဲ။
ထမီကုန်း ကောက်ပြီး တစ်ခိခိတောင်ရယ်ပြနေပါ သေးတယ်။ ” ဟုတ်တယ်ကွာ..ငါတော့မင်းမင်းနဲ့ လိုးရတာ တအားကြိုက်သွားပြီ..နင့်ကို လဲပေးလိုးထားတာပဲဟဲ့..ငါလဲအမေ့ကို ပြန်ပြောလိုက်မှာပေါ့ ” ပြည့်စုံအသံထွက်မလာတော့ဘူး။သူ့ အစ်မစောက်ဖုတ်ကြီးကြည့်ပြီး သူ့လီးက တောင်လာပြန်တယ်။ ” အေးပါဟာ..ဒါဆိုလဲ မတိုင်ပါဘူး.ငါ အခု နင့်ကိုလိုးချင်နေတာဟ..ပေးလိုး နော်..လာကွာ..သွားလိုးရအောင် ” ဖူးအိကဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်ပြီး အိမ်သာထဲဝင်သွားတယ်။ခဏနေတော့ ပြန်ထွက်လာပြီးပြည့်စုံလက်မောင်းကိုဆွဲ ခေါ်သွားတာပေါ့။ ” နင် အကြာကြီးလိုးရမှာနော်..ခဏ လေးနဲ့ပြီးမသွားအောင်ထိန်းလိုး.နောက် ပြီးတော့..မင်းမင်းလိုပဲ နင့်လီးရည်တွေ ကိုလည်းငါ့စောက်ပတ်ထဲထည့်ပေးရမှာ..ဒါဆိုပေးလိုးမယ် ” ” အင်း..ထည့်ပေးမယ်..ပေးလိုး.” ပြည့်စုံတအားလိုးချင်နေပြီမှန်းသိနေ တော့ ဖူးအိကသူလိုချင်တဲ့အချက်တွေအပိုင်ကိုင်တယ်။ဟိုကောင်ကလဲခေါင်း တစ်ညိတ်ညိတ်ချည့်ကတိပေးနေတော့ တာပဲ..မွှန်နေပြီ။နောက်ဆုံးတော့အခန်း ထဲရောက်ပြီးအဝတ်တွေချွတ်တော့မှ ” နေဦးဟဲ့..ငါနဲ့မင်းမင်းနဲ့လိုးတာကို နင်ကျေနပ်တယ်မလား..အမြဲလိုးရင်လဲ ကြည်ဖြူမယ်မလား ” ” ကြည်ဖြူမယ်ဟာ.လိုး လိုး.ငါ့လည်း ပေးလိုး..အကုန်ကြည်ဖြူမယ် ” ” ဒါဆို..ဟိုကောင်က ငါတို့အမေကို တက်လိုးသွားရင်ကော..ဘယ်နှယ်လုပ်မ လဲ..အမေကလည်းအကိတ်နော.ဖင်ကြီး တွေမှယွတွတ်နေတာရီး ခိခိ..နင်တောင် မှလိုက်ငမ်းနေရတာမလား.ဟွန်း.” သူပြောတာမှန်နေတော့ပြည့်စုံဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ပဲမျက်နှာနီနေတယ်။သူတို့ အမေကလည်းလိုးပစ်ချင်စရာပုံစံကြီးမို့ သူကိုယ်တိုင်က လိုက်ငမ်းနေတာလည်း အမှန်ပဲလေ။ဒီကောင်အစ်မကိုလိုးပြီးမှ အမေ့ကိုလိုးဖို့ဆိုတာက.အဲလောက်ကြီး တော့ဖြစ်မလာနိုင်လောက်ပါဘူး.နောင် ခါလာနောင်ခါဈေးပဲ လို့ဖြေသိမ့်အတွေး လေးတွေးပြီး ” လိုး လိုးဟာ..လိုးပါစေပေါ့..အမေခံ ချင်နေရင်ငါတို့တားလို့လည်းမရပါဘူး.. လိုးပေ့စေ..အခု နင့်ကို ” ” အင့်..လိုး..ခိခိ..အသေလိုးဟယ် ” ဖူးအိက သူသိပ်အရသာတွေ့သွားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါင်ကြီးတွေရင်ပတ်နဲ့ကပ်ပိ နေတဲ့အထိဆွဲတင်မြှင့်ပေးပြီးခြေကျင်း ဝတ်တွေလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲထားပေးပြန် တယ်။
အရင်ကဒီပုံစံမျိုးပြည့်စုံတစ်ခါမှမ လိုးခဲ့ဖူးတော့ ပြူးမို့ထွက်နေတဲ့ သူ့အစ်မ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည့်စုံလီးက တစ်ဖျောင်းဖျောင်းတောင်နေရော။ကတိ တွေဘယ်လောက်ပေးထား ပေးထား ဒီ လိုပုံစံကြီးမြင်တော့စိတ်မထိန်းနိုင်ပါဘူး.. ကုတင်ပေါ်ခုန်တက်လို့အားလျားမှောက် ပြီးသူ့လီးကြီးလက်နဲ့မထိန်းတော့ပဲတန်း ထိုးပြီးလိုးပစ်တယ်။စောက်ရည်နဲ့နူးအိ နေတော့ပူနွေးနူးညံ့တဲ့စောက်ခောင်းထဲ လီးဝင်သွားတဲ့အရသာကိုပြည့်စုံဘယ်လို မှတောင့်မခံနိုင်ဘူး။အချက်နှစ်ဆယ်သုံး ဆယ်လောက် တရကြမ်းပိတ်ဆောင့်ပြီး လီးရည်တွေပန်းထွက်သွားတယ်။လီးဝင် ပြီးတဲ့နောက်.မဆောင့်ပဲငြိမ်နေရင်လည်း ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်မယ့်အတူတူတော့ လီးရည်ပန်းထွက်သွားမှာပါပဲ။အားရပါးရ ဆောင့်လိုက်ရတာအမြတ်ပေါ့ လို့တွေးမိ တော့လည်းဖြေသိမ့်လို့ရသွားပါတယ်။ ” ဟွန့်..ဒါပဲလားကွာ..” လိုးတဲ့လူကညံ့တော့ ဖူးအိကမပြော သင့်မှန်းသိပေမယ့် အားမလိုအားမရနဲ့မို့ လွှတ်ကနဲထွက်သွားတယ်။ပြည့်စုံကလိုး ဖို့ထပ်မကျိုးစားတော့တာနဲ့ ဖူးအိလည်း အဝတ်တွေပြန်ဝတ်ပြီး ” လာကွာ..မင်းမင်းဆီသွားရအောင်. သူ့ကိုပဲ ထပ်လိုးခိုင်းရတော့မှာပဲ ခိခိ နင် ငါတို့လိုးတာကို ထိုင်ကြည့်မလား ” ” အာ..မကြည့်ချင်ပါဘူး..ဒာမျိုး စိတ်မ လာဘူး..လိုက်ပို့ရုံပဲအဖော်လိုက်မယ် ” ” အထဲထိလိုက်ကြည့်ပါဟဲ့..စိတ်လာ တော့နင်လည်းတက်လိုးပေါ့..နင်တို့တစ် ယောက် တစ်လှည့်စီလိုးမယ်ဆိုရင် ငါခံနိုင်ပါတယ် ” တကယ်တော့ မင်းမင်းနဲ့အိဖြူတို့ အ ခန်းထဲမှာရေကုန်ရေခန်းလိုးနေကြမယ် ဆိုတာ ဖူးအိကသိတာပေါ့။တမင်သက် သက် ပြည့်စုံကိုမြင်စေချင်လို့ခေါ်တာပါ။ ပြည့်စုံကလည်း မလိုးရခင်က ဝန်ခံကတိ တွေအမျိုးမျိုးပေးထားခဲ့ရတာဆိုတော့မခံချည့်မခံသာနဲ့လိုက်သွားရတော့တာပဲ ပေါ့။အခန်းနားမရောက်ခင်ကတည်းက တစ်ဖုံးဖုံး တစ်ဖျောင်းဖျောင်းနဲ့ဆောင့်သံ လိုးသံ အသားချင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ပစ် ရိုက်သံတွေကိုကြားနေရပြီ။တစ်လှမ်းနှစ် လှမ်း တိုးသွားတော့စကားပြောသံ အော် သံ ညည်းသံတွေအတော်ပီပြင်သွားပြီမို့ ဖူးအိကပြည့်စုံလက်မောင်းကိုကိုင်ထား ပြီး နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေရှေ့ မှာလက် ညှိုးလေးထောင်ပြတယ်။အသာလေးရပ် ပြီးနားစွင့်ကြည့်တော့.. ” အာ့..အားဟာ့..ဆောင့်..ဆောင့်.. တအားပစ်ဆောင့်..အားဟာ့..အားရပါးရ ပစ်ဆောင့်လိုး..အိုးဟို့.ကောင်းလိုက်တာ နော်..ဆောင့်..အမေရေ.ဆောင့်ဆောင့်. ပြီးခါနီးပြီမောင်..အာ့ မမဖြူပြီးတော့မယ် အားဟား..သွက်သွက်ကြီးပစ်ဆောင့်ပါ.. အင့် အင့် .အိုးဟိုး .အာ့ .မောင့်လီးရည် တွေပန်းထွက်လာပြီ..အူးဟူးယူး..မမလဲ ပြီးပြီမောင်..ပြီးပြီ..ပြီးပြီ..အိုး ကောင်း.. ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရာ..ဟင့် ဟင့်.. လီးကြီးပေး.လီးကြီးပေးလို့..ဟင့် လီးစုပ် ပေးမလို့..အာ့ ပလွတ် ပွတ် ပု ပု ပြွတ်. ပလွတ်..အူးဟူး ” သူတို့နှစ်ယောက်တံခါးကြားကချောင်း ကြည့်တော့မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့မင်းမင်းရဲ့ လီးတန်.ရှည်မော့မော့ကြီးကို မြဖူးက ဒူး ထောက်ထိုင်ပြီးအားရပါးရစုပ်ပေးနေတာကိုမြင်ရတယ်…..ဆက်ရန်။